Modern Manufacturing Magazine : October-December 2016 Myanmar Edition by Thailand's Industrial & Engineering magazines - Issuu
Vol.1 No.4 October-december 2016
magazine for myanmar industrial development
မြ မနမ်ာ စကမ်လှုပုင်န်း တိးု တကမ်အှုတွက် မဂဇ္ဂင်း
ပစ္စည်းများအလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းမှုနည်းပညာ နှင့်လက်ရှိစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု Automated Material Transfer Technology Upon Economic Growth Trend
P.23 How to Make Production Plan To Get Low Cost and High Profit
P.40 Check List for Switchgear Cabinet in Industrial Plant
စက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံအတွင်း လျှပ်စစ်မီး၏ ဆွစ်(ချ)ဂီယာ (Switchgear) ခလုတ်ခုံ
ကနုပ်စည္စ်း ဒဇီယဆ်ီ မီးအားပေးစက် လေဖအိားပေး မတှု စ်က် အခြားပစည္စ်းကရိယိာများ ဂဟေဆော် မီးအားပေးစက် စလကို မ်ီးပြ မျှောစ်ငယ်ာဉ် လလူကိုပါနငို သ်ည့် ကရနိ်းယာဥင်ယ် ကတ်ကြေးပသုံ ဏ္ဍာနတ်ကသ်ွားသည့် ဝနခ်ျကီရနိ်းယာဥ
Rama3: 759 Rama3 Road, Bangpongpang, Yanawa, Bangkok 10120 Bangna (km25.5) : 54/15 Moo7Bangna Trad km.25.5, Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Rayong : 119/2 Moo3Huapong, Muang, Rayong 21150
Tel : (66) 2294 8946-55 Tel : (66) 2708 5991-4 Tel : (66) 3868 2155 Website: www.namsang.com
ဟနဒ်ယလ်(် Handal)၊ စခရူး အဲကွနပ်ရကရ်ှာ (Screw Compressor) များကို အဆငြ့်မငမ့်ားသော ဒဇီငိုးနငှ့် ဖနရ်ငှမ်ျားဖြင့် လျှပစ်စမ်ီးတည်ြငမိမ်မှုရှေိ သာ ဧရယိာများအတွကအ်ထူးတထွီငထ်ားသည။် အဆင/့် ဟနခ်ျကတ်မ်ိ်းစောင်းခြင်း ကာကွယမ်ှု နငှအ့် တ,ူ လျှပစ်စမ်တည်ြငမိမ်ှေုတွရှာဖွေတွေရ့  သှိ ညအ့် ချနိတ်ွင် စကက်အလအို လျောက် unload ပြုလပုလ်မိမ့် ည။် အကယ၍်တည်ြငမိမ်ြှုပင်းထနလ်ျှင် နောကဆ်ုးံတွငစ်နစက်လိုးံဝပတိေ်ပးလမိမ့် ည။်က် Compressor အဆပိုါစကသ်ည် လျှပစ်စ်ေရှာခြ့်ဖစ်ေသာအခါတွင၊် လေမတှုစ ၏ပြင်းထနသ်ည့် ပြဿနာကို ဖြစ်ေပါ်စေနငို သ်ည့် ဝကအ်၏ူပြောင်းပြနလ်ညပ်တမ်ကှုို ကွယတ်ားဆီးနငို ရ်နလ်ည်းဒဇီငိုးပြုလပုထ်ားသည။် ဤအရာသည် အဓကိမောတ်ာ overload ဖြစ်ြခင်းမှ ကာကွယ်ေစာငေ့် ရှာကမ်တွှုငက်ညူရီန် လကရ်ှိ Host / Fan နငှအ့် တပူါလာသည။် ၄င်းနငှအ့် တ၊ူ လျှပစ်စတ်ည်ြငမိမ်ဧှုရယိာထဲမဟတုသ်ညတ့် ငိုေ် အာင် အဆပိုါစကသ်ည် သငေ့် လျာလ်မိမ့် ညဟ်ု အာမခနံငို ပ်ါသည။်
SERVICE MAINTENANCE FOR USED AMADA USED AMADA FROM JAPAN:
LASER CUTTING PUNCH PRESS PRESS BRAKE SHEARING BAND SAW
JAPAN USED LASER
JAPAN USED TURRET PUNCH
PCB-BANGKOK.COM အပိုပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ခြင်း၊ စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းများ ကျွမ်းကျင်သူနှင့် USED AMADA စက်အသုံးပြုနည်းကို အသက် 15 နှစ်ကျော် အတွေ့အကြုံရှိ ကျွမ်းကျင်သောပညာရှင်များအ ဖွဲ့များနှင့်အတူ သင်တန်းပေးလေ့ကျင့်ပေးသည်။
JAPAN USED PRESS BRAKE
JAPAN USED SHEARING
JAPAN USED BAND SAW
Tel:+66.2.899.6374 Mobile:+66.86.308.0698 E-mail : info@pcb-bangkok.com
PCB Bangkok-Used AMADA
စုပေါင်း ဘဲယားရင်း၊ မူလီချိန်းကြိုး၊ လယ်ထွန်စက်နှင့် စပါးရိတ်စက်ပန်ကာကြိုးများညှိပေးခြင်း
ကုမ္ပဏီ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဤသို့ဖြင့် ၃၅ နှစ်ကျော် စီးပွားရေးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့သည် ဘဲယားရင်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးတွင် ဦးဆောင်သူဖြစ်ပြီး ရှည်လျားသော အတွေ့အကြုံများနှင့် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝဖြင့် အရည်အေ သွးရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ဖောက်သည် အလွှာအုပ်စုတိုင်း NSK NTN ကဲ့သို့သော ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ကုန်ပစ္စည်းများကို ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် ကိုးရီးယားနိုင်ငံ အဆင့်မြှင့်စက်ရုံများမှ လယ်ထွန်စက်၊ စပါးရိတ်စက်တို့နဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး ဖောက်သည်တိုင်းကို ဝန်ဆောင်မှု ပေးဖို့ရန် ကျွန်တော်တို့၏ စေတနာအရင်း သာဖြစ်သည်။
Bearingscenter (Thailand) Co., Ltd. 25/9-10 Rama VI Road (URUPONG) Rongmuang Pathumwan Bangkok Thailand 10330 Tel : (66) 2613 9060 Fax : (66) 2613 9068 Email : bearinggroup@gmail.com
Hotline: (66) 81 810 8130
1980 : Bearings Center Ltd, Part. was established by Mr. Suriya Aphichawakoonkhajorn, the founder 1992: Bearings Center (1992) was resisted. 1994: Bearings Center Co.,ltd has been registered due to the size of the total year sale value. 1999: Certificate of Application NTN Awards 2000: Greatly Appreciate NSK Awards (At NSK Headquarters) 2004: Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Singapore forum) 2005: Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Thailand Forum Bangkok) 2006: Certificate awarded of grand success of Bearings Units during 2004-2005 2006: Corporate Award of Merit Greatly Sales Effort of NTN Product 2007: Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Thailand Forum Phuket) 2008: Application of Outstanding Performance NSK Awards 2009: Application of Outstanding Performance NSK Awards (At Singapore Forum)
၁၉၈၀ ခုနှစ်တွင် ဘဲယားရင်းစင်တာ
ကမ္ဘာ့လေဖိစက်လုပ်ငန်း ရှေ့ဆောင် တရားဝင် ဖြန့်ချိသူ
• ဝန်စည်နိုင်အား 10-600 Hp • ဆီရွှဲစိုမှု၊ ဆီကင်းမဲ့မှု၊ အဆင့် (၂) ခု • စက်ပစ္စည်းများနဲ့ဆိုင်သော လိမ်အဆို့ရှင်ဖြင့် ၁၇
ရာခိုင်နှုန်းအထိ စွမ်းအင်ချွေတာမှုကို မူပိုင်ခွင့်ပြုထားသည်။
• မိုးကာလ၊ နွေကာလအတွက် သင့်လျော်ပြီ ကြာရှည်ခံသည်။ • စက်ပစ္စည်း အစုံလိုက်ရှိပြီး ပို့ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ • 50-200 Hp အဆင့်မှာတင် စက်အရံ (stand by)ကို အခမဲ့ အသုံးပြုခွင့် ပေးထားသည်။
• လေထိုးစက် အမျိုးအစားတိုင်း ပြုပြင်ခြင်းကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသည်။
• လေထိုးစက် ဝက်အူနတ် အမျိုးအစားတိုင်းကို ဝယ်ယူသည်၊ ရောင်းသည်၊ ငှားသည်။
အလုပ်သမားအဖွဲ့နဲ့ အင်ဂျင်နီယာ အတွေ့အကြုံ နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ် အထက်ရှိသည်။စက်ရုံတွင် အကြံပေးခြင်းနှင့်
လေနည်းစနစ် ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခြင်း။ မကြာမီ အတောအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝန်ဆောင်မှုဌာန ဖွင့်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ အရောင်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှု ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် စိတ်ဝင်စားသော မည်သူမဆို မတ်စတာ စောချစ်ဦး ဖုန်း ၀၉၄ ၂၅၃ ၉၇၈၆ သို့မဟုတ် မတ်စတာ အနိုင် ဖုန်း ၀၉၄ ၉၄၂ ၈၃၉၆ တို့ ဆက်သွယ်နိုင်သည်။
EXTRA VALUE CO., LTD. အမှတ် (၆) ၊ ငမ်ဝုန်ဝမ်
(၃) ၊ (၅) လမ်းခွဲ ၊ ငမ်ဝုန်ဝမ်လမ်းမကြီး ။ အမောင် နွန်ထဘူရီ ၊ စာတိုက်အမှတ် ၁၁၀၀၀ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ။
ဖုန်း (၆၆) ၂၉၅၂ ၆၇၂၅-၆ ၊ ဖက်စ်(Fax) (၆၆) ၂၉၅၂ ၆၇၂၇ ဝက်ဆိုဒ်စာမျက်နှာ www.extravalue.co.th အီးမေးလ်လိပ်စာ center@extravalue.co.th
Plusmax Automation Co., Ltd. Is the distributor of inclusively and diversified automation products. We are able to supply the products to meet all the needs of the customer in every industry, under the satisfied budget and maintaining the fully permance.
Products: Power Chuck, Cylinder, Rotary Joint
Products: PLC, Inverter, Servo Motor, HMI
Products: Ball bearing, Linear Guides, Ball Screws, Roller Bearibg
Products: Timmer, Plc, Sensor, Relay, Socket
Products: Motor, Servo, Sensor
Products: Motor, Inverter, Sensor
Products: Linear Guides, LM Guides, Linear Bush
Products: Roller Chain, Power Lock, Sprocket
Products: Robot, Motor, Servo System, Inverter
PLUSMAX AUTOMATION CO.,LTD. 17G-H Fl., Ocean Insurance Bldg., 163 Surawongse Rd., Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel : (66) 2235-3295-8 Fax : (66) 2235-3299
Email : warunthorn@plusmax.co.th Website : www.plusmax.co.th
LOCAL MARKETING OFFICE & DISTRIBUTOR:
Advance Economy Convenience United Co., Ltd. (AEC United Co., Ltd.) No.(A6), Room No.(F), Natchaung Condomenium, Tamwe Township, Yangon Myanmar. TEL. 01 430 032, 01 551 477 MANAGING DIRECTOR:
EDITOR IN CHIEF JIRAPAT.K@GREENWORLDMEDIA.CO.TH
Green World Media (Thailand) Co., Ltd. 244 Soi Ladprao 107, Ladprao Road, Klongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand. TEL: (+66) 2731 1191 to4FAX: (+66) 2769 8043
မြန်မာနိုင်ငံ… စက်မှုလုပ်ငန်း ၄.၀ ခေတ် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်အတွင်း အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုများနှင့် အများပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ် ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ထောက်ပမ့ံ စှုက်မလှုပုင်န်းများအပါအဝင် လမ်းပမ်းဆက်သယ်ွရေး၊ ဆိပက်မ်း၊ အထူးစီးပွားရေးဇုနမ်ျား ဖြွံ့ ဖိုးတိုးတက်ရေးသည်၊ ကမ္ဘာ တစ်ဝှမ်းရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏အာရုံစိုက်မှုကို ကောင်းမွန်စွာဆွဲဆောင်နေလျှက်ရှိသည်၊ ယခုအချိန်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းများ ၄.၀ ခေတ်ဖြစ်ပြီး၊အရေးကြီး သည်မှာ စက်မလှုပုင်န်းရှငြ် ကီးများနှင့် အိမရ်ငှန်ငို င်အံဖြစ် ပြည်တငွ်းရင်းနှီးမြှုပန်သှံ မျူား၏ အခွငအ့် လမ်းများ ရှင်းလင်းစွာချဲ့ထွင်သောခေတ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံ၏ဒေသတစ်ခုချင်းစီ၏ အစစအရာရာပြည့်စုံခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝပေါများခြင်း၏ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်သော မြို့ကြီးများအတွင်း အခြေခံဖွဲ့စည်း မှုများသင့်တင့်စွာထောက်ပံ့မှုရှိခြင်းသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ဝန်ဆောင်မှု များ၏အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်၊ အခြေခံ ဖွဲ့စည်းမှုများ၏အဆင်သင့်ဖြစ်မှုတို့ကိုအားကိုးအားထားရသည့်ထုတ် လုပ်စက်ရုံများတည်ဆောက်မှုလည်းပါဝင်သည်။ များစွာသောဒေသအနှံ့  အပြားတွ င် အရေးကြီးသောစို က် ပျိုးရေးဒေသများဖြစ် သ ည် ၊မြေသြဇာကောင်း မွ န်ေ သာစို က် ပျိုး မြေ၏ထောက် ခံ မှု နှ င့် အ တူ သ ဘာဝရေများရရှိနို င် မှုေ ကြာင့် အစားအစာ ထု တ် လု ပ် မှုနှ င့် အ သွ င်ပြောင်း မှု စ က် မှု လု ပ် င န်း များ၊ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ အတွက်သင့် လျှော်သည်၊ အချို့နေရာများတွင်လူဦးရေထူထပ်မှုရှိပြီး၊အထူးသဖြင့်နုပျိုငယ်ရွယ်သူများ
Dr.Wongwit Senawong Asst. Prof. Dr.Thara Cholpranee Suriyan Tiampet Pongtorn Manupipatpong Thavorn Suwankij Chalermchai Su-Uthai
ရှိသဖြင့်အလုပ်သမား လိုအပ် သောစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလွန်သင့်လျှော်သည်။ ထို့အပြင်မော်တော်ယာဉ် နှင့်အစိတ်အပိုင်းလုပ်ငန်းကဏ္ဍများ၊ သတ္တုတွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စွမ်းအင်စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ အဆောက်အဦးပစ္စည်းဆိုင်ရာစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ ကျောက်မျက်နှင့် လက်ဝတ်ရတနာစက်မှုလုပ်ငန်းများစသည်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်မှုကို ကောင်းမွန်စွာဖန်တီးပေးမည့် စက်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်ကြသည်။ ခေတ် သ စ် ထု တ် လု ပ်ြ ခင်းမြန် မာ Edition ကို ၏ Modern Manufacturing ဆို င် ရာ ဤ Myanmar Edition စာစောင် အနေဖြင့် မြန် မာနို င် ငံ အ တွ င်း လု ပ် င န်း ရှ င် များအတွ က် အထောက် ပံ့ ပို့ေ ဆာင်ေ ရး၊ ကု န် ထု တ် လု ပ် မှု စွ မ်း အား တိုးမြှ င့်ေ ရး၊ စက် မှု လု ပ် င န်း လု ပ် င န်း အတွ င်း လျှ ပ် စ စ် မီး စနစ် ၊ အလို အလျောက် ပ စ္စ ည်း ရွှေ့ ပြောင်းသောနည်း ပညာများ ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ၊ စက်မှုလုပ်ငန်းလောက အတွင်းလှုပ် ရှားမှုများ၊ စက်ရုံဘေးကင်းလုံခြုံရေး များနှင့်အစာအာ ဟာရအသွင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ Directory of Industrial Machinery and Equipment အပါအဝင် Product Show ထဲက စက်ယန္တရား စက်မှုလုပ် ငန်းနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ စက်ပစ္စည်းကိရိယာများကို ပို့ဆောင်ပေးရန်တစ်ခုသောမီဒီယာအ ဖြစ် စွမ်း ဆောင်ပေးစေလုိုပါသည်။ ဤ Modern Manufacturing စာစောင်သည် စီးပွားရေးလုပုင်န်းရှငတ်ငိုးအတွက် မြန်မာနိငုင်တံငွ် စက်မလှုပုင်န်းဆောင်ရကွ် မှုများရည်မနှ်းချက်ပန်းတိင်ုရောက်ပြီး၊အောင်မြင်မရှုရှရိန်အကျိုးခံစားခွငမ့်ျားအနည်းနှငအ့် များလက်ခရံရှလိမိမ့် ည်၊ ဖတ်ရသှုမျူားထံမှ နွေးထွေးမှုများအစဉ်အမြဲလက်ခံရရှိလိမ့်မည်ဟု စာ စောင်လုပ်ငန်းအသင်းအဖွဲ့အားလုံးကမျှော်လင့်ပါသည်။
Jirapat Khamyat EDITOR:
Thossathip Soonsathorn EDITORIAL STAFF:
Sawitree Sinpru Pemika Sompong Pinyaporn Chatkaroon ART DIRECTOR:
MYANMAR… DURING INDUSTRY 4.0 ERA
Infrastructure development and public utility system, ship transporting route, harbor, special economic zone as well as supporting industries in the Republic of the Union of Myanmar has significantly caught the attentions of investors across the globe at the moment which is considered as Industry 4.0 era and more importantly is the distinctive opportunity expansion for industrialists and domestic investors on behalf of the host. The charm of readiness and richness in each region of the country, for example, in big cities, there are some good infrastructures that give opportunity to do service business operation as well as production plant construction which needs the readiness in infrastructures. Besides, other regions are the major cultivating sources deriving from the richness in agricultural land and readiness of natural water sources. This makes the country being suitable for food production and food processing industries, and agriculture industry, while in some areas with high population particularly in the youth age, these will be perfectly suit for industry that the labor force is the key factor. While automotive and part industries, mining industry, power industry, constructing material industry, gem and ornamentation industry, etc. all are industries that will very well drive Myanmar’s economic growth. Modern Manufacturing magazine, Myanmar Edition would like to take part to deliver news & information, and movement in industrial sector to entrepreneurs in Myanmar. This issue features several interesting topics included Logistics, Productivity Increasing, Electrical System in Industrial Plant, Automated Material Transfer Technology, Safety in Industrial Plant and Food Production and Processing as well as Machinery Technology and Industrial Devices in Product Show and Directory of Industrial Machinery and Equipment.
Piyaporn Khumchan Chutikarn Kritdasaengsawang Arnat Pengpinij ACCOUNT DIRECTOR:
Aunyarin Jeerakomonpong Wannisa Sopin Pornlakar Pannarak Wannalak Sosanuy
Editorial team truly hopes that this issue of Modern Manufacturing will give insightful knowledge and benefits to all entrepreneurs for accelerating Myanmar’s industries to achieve the goals, and for the upcoming issues, we also hope to receive warm welcome from the readers forever.
Modern Manufacturing Myanmar Edition
G.P. Cyberprint Co., Ltd TEL: (+66) 2731 1155-60 FAX: (+66) 2731 0936
contents vol.1 no.4 OCTOBER-DECEMBER 2016
ကျွမ်းကျင်သူနှင့်မြန်မာနုင်ိငံစက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍပေါ်အမြင်များ JWD Group; Logistics Expert Reveals the Vision upon Myanmar’s Industrial Sector
ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုစီမံကိန်းချမလဲ၊	ကုန်ကျစရိတ်နည်း၊ အမြတ်အစွန်းများ How to Make Production Plan
to	Get	Low	Cost	and	High	Profit
ပစ္စည်းများအလိုအလျောက်လပြောင်ွှဲးမှုနည်းပညာ
နှင့်လက်ရစှီိးပွားရေးဖွ့ဖြုံးတိုးတက်မှု Automated Material Transfer Technology
upon Economic Growth Trend
‘ကြုတင်ိကာကွယ်ခြင်းသည်	ပြုပြင်ခြင်းထက်	ပိုကောင်းသည်’
နိငုင်ြံ ခားမှစက်ရအုံ တွင်း မတော်တဆဖြစ်မ၏ှုဖြစ်ရပ်မနှေ်လ့လာချက် ‘Prevention is Better than Cure’ Case Study of Factory Accidents in Foreign Countries
ထိရောက်သော	အစားအစာသက်တမ်းကာလဆိုင်ရာစီမံခန့်ခမွှုဲ	Food ERP: Effective Management Planning for Food’s Life Span
စက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုံအတွင်း	လျှပ်စစ်မီး၏	ဆွစ်(ချ)ဂီယာ
(Switchgear)	ခလုတ်ခုံ Check List for Switchgear Cabinet in Industrial Plant
ကုန်ပစ္စည်း	ဟန်ပြခြင်း	အီနှင့်	စက်အစိတ်အပိုင်းများတို့၏ INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT PRODUCT SHOWCASE
အီနှင့်	စက်အစိတ်အပိုင်းများတို့၏ဒိုင်ရိတ်တောရီ DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT
“SERVE YOU THE SATISFACTION” 54/2 Ekachai Soi 8 Ekachai Rd., Bangkunthien,Jomthong, Bangkok 10150 Thailand
TEL : +66 2893-9797-8 MOBILE : +66 6-3209-6694 FAX : +66 2893-7287
E-mail : kittichai@siamseimitsu.co.th info@siamseimitsu.co.th
၁၀ နှစ်အတွင်း သတ္တအသုံးပြုမှု အကြီးအကျယ်တိုးမြှင့်သောအိနယ္ဒိ India Greatly Demands the Use of Steel within 10 Years Period ယခုမှစ၍ နောက် ၁၀ နှစ်ကာလအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ကမ္ဘာ ပေါ်တွင်
သတ္တုဝယ်လအိုား အများ ဆုံးရှိသောနိုင်ငံပေါင်းထဲမျ တစ်နိုင်ငံဖြစ်လာပါလိမ့်မည်၊
သတ္တုစက်မှုလုပ်ငန်းခေတ်ရေစီးကြောင်း ၃ ခု
ခံ အဆောက် အ ဦများစီ မံ ကိ န်း တွ န်း အားပေးအကျိုး ရလဒ်ေ ကြာင့်ြ ဖစ် သ ည် ။
Three Metallurgic Trends to Keep an Eye On
အစိုး ရနှ င့် အမျိုးမျိုးသောအခြားအချက် အ လက် များက တို င်းပြည် ၏ အခြေ ဥပမာ-လမ်း ပမ်း တည်ေ ဆာက် မှု ၊ သို့  မ ဟု တ် အဝေးပြေးလမ်း မများ၊မီး ရထား လမ်း များတည်ေ ဆာက် မှု လု ပ ငန်း များ၊ မော်ေ တာ် ယာဉ် လု ပ် င န်း ကဏ္ဍကို ယ် တို င် လ ည်း စီး ပွားဖြစ်ေ မာ်ေ တာ် ယာဉ် များ၏ ထု တ် လု ပ် များအတွ က် သတ္တု
Research and Markets ဝက် ဘ် ဆို က် မှ သ က် ဆို င် ရာသတ္တု စက် မှု လု ပ် င န်း ၏
ဝယ်လိုအား တိုးမြှင့်လျှက်ရှိသည်၊ အခြေခံအဆောက်အဦ တစ်မျိုးတည်း၏ရင်း
အချက်အလက်စု ဆောင်းမှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ နမူနာ ဒေသသုံးခုခွဲခြားနိုင်သည်၊
နှီးမြှုပ်နှံမှုသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းတစ်သန်း (One trillion dollars)
၄င်းတိမ့ှုာ အမေရိက၊ APAC နှင့် EMEA ဖြစ်ပြီး၊ ဈေးကွကထ်ခိကိုစေသည်အ့ဓိကအကြောင်း
ရင်းထဲမှ တစ်ချက်မှာ မော်တော်ယာဉ်စက်မှုလုပ်ငန်း အတွက်အသုံးပြုသော Friction
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလတွင် ကမ္ဘာတွင် သတ္တု တတိယအကြီးဆုံး
Stir Welding နည်းလမ်းချိတဆ်က်မပှုစုံဖြစ်သည်၊ ဤ Technique သည် အစက်နစှစ်က်ကို
ထုတလ်ပုသ်ည့် နိငုင်ံဖြစ် သော်လည်း တရုတန်ငို င်၏ံသတ္တထုတုလ်ပုမ်တှုငွလ်အို ပ်
တိကျမှနက်န်စွာဆက်သွယထ်ားသည်အ့ပြင်လက်ခရံရှိသောထုတက်နုအ်ား အခြားနည်း
သည်ထက်ထတုလ်ပုမ်ှုကြောင့် အိနယ္ဒိ နိငုင်အာံး ထုတု ကုနုမ်ျား လိအုပ်သည်ထက်
လမ်းထက် ပို၍ မှန်ကန်စေသည်။
အနာဂတ်ေ ဈးကွ က်ေ ရစီးကြောင်း (Market Trends) ကို တွ န်း အားပေးသော
အဟုန်အား ပို၍ ကောင်းမွန်စွာမြှင့်တက်စေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုး
အခြားအရေးပါသည့် အချက် မှာ - 3D ကိ ရိ ယာဆို င် ရာပစ္စ ည်း ကိ ရိ ယာများဖြစ် သ ည် ၊
တိုးတက်မသှုည် ရင်းနှီးမြှုပန်မှံ အှုတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်စတိဝ်င်စားဖွယ်ကောင်း
ဥပမာ- တိုင်းတာသောကိရိယာနှင့်စစ်ဆေး ကိရိယာသည် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကိုရှာ
ဖွေနေသော ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးဝယ်လိုအား၏ရလဒ်ဖြစ်သည်၊ သတ္တုစက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရင်း နှီးမြှု ပ် နှံ သူ များသည်
တိ ကျမှ န် က န် မှုနှ င့်နူး ညံ့ သိ မ်ေ မွ့  မြှု မင့် မားသော ထု တ် လု ပ်
Within 10 years period from now on, India will become one of the
မှု အ တွ က်ြ ပင် ဆ င် ရ မည်ြ ဖစ် သ ည် ၊ 3D လု ပ် င န်း အပို င်း အစစစ်ေ ဆးမြှု ဖစ်ေ သာ
countries that need the largest volume of metal works in the world. This
derives from the cabinet’s policy to rush on infrastructure development
as well as other several factors including the construction of the roads,
ဈေးကွက်အတွက်မှာမူ 2008 ခုနှစ်ကတည်းကအကျုံ့အနှံ့အခြေအနေကြုံတွေ့ခဲ့
viaducts or even railways, while automotive industrial sector also needs
ရသော ဥရောပ (အီးယူ) သည် လွန်ခဲ့သော၂ နှစ်ကစပြီး၊ စတင်ကောင်းမွန်လာသည်၊
more volumes of steels to manufacture commercial vehicles which only
မ ခို င် ခံ့ေ သာ သ ည့်ြ ပ ည် တွ င်းေ ရးေ ဈး ကွ က် ၏ လို အ ပ် ချ က် ကို ၏ ရ လ ဒ်ြ ဖ စ်ြ ပီး ၊
infrastructure projects alone was worth as high as one trillion US dollars.
လောလောဆယ် တွ င် ဥရောပပြင် ပဈေးကွ က် ၏ ပေါင်း စပ် မှုေ ကြာင့် ဖြစ် သ ည် ၊ မူ လ က
Even though at the moment India is considered as the world’s
ဥရောပ၏ စက်ကိရိယာ ဝယ်လိုအားသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝယ်လိုအား၏ ၄၀%
third biggest steel manufacturer, the consequence of Chinese steel
ဖြစ်ပြီး၊ လက်ရှိဈေးကွကဝ်ယ်လအိုားသည် ၂၀% သာကျန်တော့သည်၊ ပစ္စုပ္ပနက်ာလတွင်
overproduction caused excessive sell to India in lower price rate. This
ဈေးကွ က် ဝ ယ် လို အားတိုးမြှ င့်ေ ပမယ့် လ ည်း ၊ ဖွံ့ြ ဖိုး ဆဲ နို င် ငံ များမှ စက် မှု လု ပ် င န်း
even rushes the growth and development for India which is considered
as an interesting trend to keep an eye on in order to make preparation for investment as well.
From data collection and analysis on related stakeholders in metallurgic industry of Research and Markets website, it has divided samples into3zones as America, APAC and EMEA founded one of main factors to affect the market is the Friction Stir Welding which is so popular in automotive industry. This technique can precisely weld two points together, while it can produce the perfect piece rather than other techniques. One of main factors to propel the market trend is 3D related appliances such as measuring and checking tools deriving from the global demand that is looking for more challenges, while most investors in metallurgic business require making preparation for precise and high sensitive production. This makes tools for checking work piece in 3D format such as laser scan integrated with cutting edge technology more important to the market. In addition to the market, the recession state in EU since 2008 tends to get pick up in the last couple years deriving from unhealthy demand of inbound market. Currently, the integration of the markets outside Europe seems to be increased up high which earlier Europe’s demand in mechanic tools was approximately 40% from the global demand, but now that figure has been dropped down to 20% even though the market demand is currently increasing. This is because of industrial repulsions in several developing countries. Source: http://goo.gl/Si3uAk
Additive Manufacturing ၏ရှုထောင့်အသစ်နှင့်လေယာဉ် New Dimension of Additive Manufacturing for Aircraft!
လေယာဉ်တောင်ပံဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ပါဝါကြီးသော Renishaw နှင့် Airbus တို့ လက်တွဲပြီး
The world’s biggest company as Renishaw and Airbus had joined hands
Wing Design Methodology Validation
under the project, called Wing Design Methodology Validation (WINDY) to
သို့မဟုတ် WINDY စီမံကိန်းအောက်တွင် ဘတ်ဂျက် ပေါင်စတာလင် သန်းပေါင်း ၁၇.၇
develop the design and manufacture the aircraft’s wings with the combined
သန်းဖြင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခဲ့သည်၊ စက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍ နှင့်ယူနိုက် တက်ကင်းဒမ်း(ဗြိတိန်)
budget as high as 17.7 million pounds. This derived from the supports of
အစိုး ရထံ မှေ ထာက် ခံ မှု ၏ ရလဒ်ြ ဖစ်ြ ပီး ၊မရှိ ဘူးသေးသောဖြစ်နို င်ခြေအသစ် ရ လဒ် ကို ဖ န်
industrial sector and government of the United Kingdom to initiate new
potential that has never been happening before.
ပ စ္စ ည်ြး ဖ ည့် န ည်း ပ ညာ ကို အ သုံး ချြ ပီးေ လ ယာ ဉ်ေ တာ င် ပံ ဖွဲ့  စ ည်း ပုံ ကို တ ည်
Using filled composites technology to manufacture the structure of
ဆော က် မှု သ ည် ရှု ပ်ေ ထွးသော ထု တ် လု ပ် မှု ကိုေ ကာ င်း မွ န် စွာ စီ မံ ခ န့်  ခွဲနို င် သ ည် ၊
aircraft’s wings allows manufacturers to handle complicated manufacturing
Additive လုပ်ငန်းစဉ်မှသတ္တု အလေးချိန် လက်ခံနိုင်မှု စွမ်းရည်ကိုတိုးမြှင့်ပေးသည်၊
very well as well as enhance the capability to takeahuge load of steel from
ဖြစ်ေ ပ်ါသောဝန် အလေးချိ န် ကို ဖွဲ့  စ ည်း ပုံ တ ည်ေ ဆာက် ပုံ ဒီ ဇို င်းဖြင့် ထိေ ရာက် စွာ
additive process which makes it easy to effectively manage incurred load
စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်၊ ဤအကြိမ်၏အကျိုးရလဒ်များသည် လေယာဉ်တောင်ပံစက်မှုလုပ်ငန်း
with structure design. This work will significantly initiate the trend to use
နည်းပညာနှင့် အခြား အစိတအ်ပိငုးများ အတွက် ဈေးကွက်ရေစီးကြောင်း(Market Trends)
more of this technology with aerospace industry as well as other related part
၏ဝယ် လို အားကို ပို မို ၍ သိ သိ သာသာ ဖန် တီးစေနို င် သ ည် ၊ ဗြိ တိ န်နို င် ငံ အစိုး ရ၏အောင်
manufacturing. This was one of the government sector’s successes to elevate
the status of UK’s leadership in aircraft wing innovation.
ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏စက်မှုထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစုသည် ၄၁ လကြာကျ ဆင်းခဲ့ပြီး၊ လွန်ခဲ့သော ဇူလိုင်လတွင် PMI အညွှန်းကိန်း မှာ ၄၈.၃ ပွိုင့်ရှိသည်၊ သို့သော်သြဂုတ်လထဲတွင် အညွှန်းကိန်း ၅၃.၃ ပွိုင့်အ ထိမြှင့်တက် လာပြီး၊တစလအတွင်း ၅ ပွိုင့်အထိမြှင့်တက်လာသည်။ ဤအကြိမ်၏နိုးကြားတက်ကြွမှုသည် အမျိုးမျိုးသောအကြောင်း အချက်များကြောင်ြ့ ဖစ်သည်၊ အဓိက မောင်းနှငအ်ားမှာ ပေါင်စတာလင် ငွေ၏တန်ဖိုးလျှော့ချခြင်းရလဒ်ဖြစ်ပြီး ကုနသ်ယွမ်ှုနငှက့် နုတ်င်ပ့ေို ဆာ င်မှု စီးပွားရေး လုပ်ငန်း များကိုလှုပ်ရှားစေသည်၊ဗြိတိန်နိုင်ငံစက်မှု လုပင်န်းအတွက်ငွေကြေး လည်ပတ်မအှုားပိမို တည်ငြိမ်စေခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောအချက်ဖြစ်သည်ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ The group of manufacturing industry of the United Kingdom has been going downhill for 41 months with PMI index rated by 48.3 points in July, but in August, this index suddenly got rebound to 53.3 points withinamonth. This wakening derived from several factors, but the main repulsion force came from the weakness in pound sterling
ဗြိတိန်နိုင်ငံစက်မှုလုပ်ငန်းများအကျုးရလဒ်ိမြှင့်တက် Operating Result of UK’s Industry Starts to Roar
currency which caused some movements to trade and export markets. This was considered asagood sign for UK’s industry from having good circulated money which meant they are getting more economic stabilization. Source: https://goo.gl/bsqapX
â&#x20AC;&#x153; We are machine partner â&#x20AC;?
LFK is not the cheapest machine in market. But LFK is the best selling machine in Thailand. LFK select good component in machine. MSM we select the right machine for customer. At MSM we have service team more than sales.
This to prove ourselves Good machine Good service Good price
No 2938/2939, Set Mu Pat st, Industrial Zone2,South Dagon Tsp, Yangon. Tel : +95-95082323
ဝန်ဆောင်မှုစိတ်ဓာတ်ဝယ်သူ ဖောက်သည်အတွက် ကြီးမားသော တာဝန် SERVICE MIND: The Great Responsibility to Customer ဦးမောင်ဝင်း ညွှန်ကြားရေးမှူး (Aung Zabu Tun Industrial Ltd. (AZBT)) “စစ် မှ န်ေ သာ ဝန်ေ ဆာင် မှုေ ပးရန် ငွေနှ င့် ဝ ယ် ၍ မရနို င်ေ သာ သို့  မဟု တ်
ဦးမောင်ဝင်းသည် အောင်ဇမ္ဗူထွန်း စက်မှုလုပ်ငန်း (Aung Zabu Tun Industrial
တို င်း တာ ၍ မ ရနို င်ေ သာ ရိုး သာြး ဖူ စ င် မှုနှ င့် သိ က္ခာ သ မာ ဓိ ရှိ မှု တို့  ကို
Ltd.) ကုမ္ပဏီလီမိတက် ၏ အလုပ်အမှုဆောင် အထွေထွေပြုပြင်ရေးစက်ရုံလုပ်ငန်းမှ
ဖြည့ဆ်ည်းပေးရမည်။” Douglas Adams ၏ ကတိကဝတ် စွမ်း အားအပြည်ရိ့ှေသာ
စတင်ခဲ့၍ နှစ်(၂ဝ) ကျော်အတွေ့အကြုံများ စုဆောင်းပြီး၊ Outdoor Panel, Indoor
စကားစုသည် ရည်ရွယ်ချက်၏ အဓိကကို ရှင်းလင်းစွာ ရောင်ပြန်ဟပ်စေသည်။
Panel, Control Panel နှင့် VCB Panel များကို အဓိကထုတ်လုပ်ပြီး ကုန်ထုတ်စွမ်းအား
ပြ င်း ထ န် မှု တြ ဖ ည်ြး ဖ ည်း တိုး ပွား လာ သ ည့် လ က် ရှိ ယှ ဉ်ြ ပို င် မှု ရှိေ သာ စီး ပွားေ ရး လု ပ် င န်း
အြေ ခ အေ နြ ကား ထဲ တွ င်
စီး ပွားေ ရး လု ပ် င န်း သ စ်
အခွငအ့် လမ်းဈေးကွကတ်စ်ခုဖြစ်သော မြန်မာနိငုင်ံ သည် စက်မလှုပုင်န်းအမျိုးမျိုး ရ င်းနှီးြ မု ပ်နှံ သူ များနှ င့်
ဆောင်ရွက်မှုများကို CNC စက်များ အကူအညီဖြင့် အသုံးပြုထုတ်လုပ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ ဦးဆောင် ထုတ်လုပ်သူအဆင့် ဖြစ်လာသည်။ အခုဆိုလျှင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အင်မတန် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားတိုးတက်လာပါတယ်၊
စီး ပွားေ ရး လု ပ် င န်း ရှ င် များ ၏ အာ ရုံ စူး စို က် မှု ကို
ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်လိုအားလည်း တိုးမြှင့်လာမှာဖြစ်ပါတယ်၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ
ရရှိ လျက် ရှိေ နသည် ။ မြန် မာနို င် ငံ အား လွ န် ခဲ့ေ သာ နှ စ် အ နည်း ငယ် အ တွ င်း
ဆို င် ရာ စီး ပွားရေး လု ပ် င န်း လို အ ပ် မှု များ လည်း တိုးမြှ င့် လာပါတယ် ဒါကြောင့် မ လို့ 
၌ြ ကီး ထွား တိုး တ တ်ေ စ ခဲ့ သ ည် ။ စီး ပွားေ ရး လု ပ် င န်းေ ဆာ င် ရွ က် မှု ဆို င် ရာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ နေ့စဉ် ထုတ်လုပ်မှုများဟာ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်မြင့်ပြီး အမှားအယွင်း
အောင်မြင်မှုတွင် “ဝန်ဆောင်မှု” သည် အရေးကြီးသော သော့ချက်ဖြစ်ကြောင်း
မရှိ ဖို့ အရေးကြီး ပါတယ် မဟုတ်လျှ င် Customer အား ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေ
ဝန် ခံ ရ ပါမည် ၊ အရည် အသွေးနှ င့် ဈေးနှု န်း ညွှ န်း ကိ န်း ယှ ဉ်ြ ပို င် မှု အားသာချက်
အချိ န် မီ ပို့ ဆောင်နို င် လိ မ့် မ ည် မဟု တ် ပါ၊ အဲ့ ဒီ လြို ဖစ် လာလျှ င် ကျွ န်ေ တာ် တို့  ရဲ့ 
များ အပြင် ရေရှ ည် တ ည် တံ့ ခို င်ြ မဲ သ ည့် ယှ ဉ်ြ ပို င် မှု စွ မ်း ရည် များ ဖန် တီး ရန်
စီးပွာရေးလုပင်န်းအပေါ် သက်ရောက်မရှုရှိ သုာံမဟုတပ်၊ဲ ကျွန်တော်တို့ Customer များရဲ့
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အပေါ်ပါ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် ကျွန်တော်တို့ စီးပွားရေးလုပင်န်းရဲ့ လုအိပ်ခ်ျက်မှာ မြင်မ့ားတဲ့ ထုတလ်ပုမ်ှု စွမ်းအားနဲ့ ဖြစ်နိုင်ေခြ အန္တရာယ်များ လျော့ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်၊ Myanmar Sheet Metal ကုမ္ပဏီ က လိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အဝ ဖြည့်ဆည်းနိုင်ပါတယ် Myanmar Sheet Metal ကုမ္ပဏီရဲ့ LFK စက်ဟာ လိုအပ်ချက်အတိုင်း လျင်မြန်စွာ ထုတ်လုပ်နိုင်သည့်အပြင် ထူး ချွ န် မှု ရှိ တဲ့ ဝန်ေ ဆာင် မှု လ ည်း ပေးစွ မ်းနို င် ပါတယ် Myanmar Sheet Metal ဝန်ထမ်းအသင်းများရဲ့ ဂရုစကို မ်ှုကြောင့် ကျွန်တော်တို့ လုပင်န်းအကောင်အထည်ဖော်မကှို ကောင်းမွန်စွာ အထောက်အကူပြုပါတယ် After Sale Services ၊ အာမခံမှု သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်ကညီူစောင့်ရှောက်မှု ထုတက်နုသ်က်တမ်း တစ်လျှောက်လုံး အကြံပေးမှုတို့ ဟာ ကျွန်တော်တို့အား ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် စိတ်ချယုံကြည်စေပါတယ် ဟု ဦးမောင်ဝင်းကပြောကြားသွားသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ AZBT ၏ ဝန်ဆောင်မှုအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချပြီးဝန်ဆောင်မှုေ ရွးချယ်သည့် Customer များအတွက် ဦးမောင်ဝင်းက ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်မှုနှင့် ထုတ်ကုန် ထု တ် လု ပ် မှု အား Customer များ၏ လို အ ပ် ချက် များကို ဖြည့် ဆ ည်းပေးနို င်ေ စရန် Customer ကျေနပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းအသုံးချမှုတွင် ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အများဆုံး ကိုက်ညီမှု ရှိစေရန် အဓိက ထားသည်။
ဦးရဲထွဋ် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး (Multi Power Engineering Co.,Ltd) ဦးရဲထွဋ်သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် တိုင်းပြည်အတွင်း Electrical Cabinet ထုတ်လုပ်ရန် လိုအပ်ချက်နှင့် အတူ သယ်ယူပို့ဆောင်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို လျှော့ချမှုနှင့် သွင်းကုန်ထက် ဈေးနှုန်းချိုသာသော ထုတ်ကုန်ဖန်တီးရန် မလေးရှားနိုင်ငံမှ ပြန်လာပြီးနောက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဦးရဲထွဋ၏်စီးပွားရေးလုပင်န်းသည် မြန်မာနုငိင်အာံး အိမန်ီးချင်းများနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်မှု ညီ မျှစေရေးအတွ က် တွ န်း အားပေးရန် ရည် ရွ ယ် သ ည် ။ M.P.E.C ထု တ် ကု န် များသည် လျှ ပ် စ စ် စ န စ် ၏ လို အ ပ် ချ က် များ ကိုြ ဖ ည့် ဆ ည်းြ ပီးထော က် ခံ မှုေ ပး သ ည် ဥ ပ မာ လျှပ်စစ်ခလုတ်များ၊ လျှပ်စစ် သေတ္တာများ ၊ Control Panel Distribution Panel သို့မဟုတ် Synchronization Panel တို့သည် စက်မှုလုပ်ငန်း ကဏ္ဍတိုင်း၏ အခြေခံဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်သည်။ “Customer များ ကျွ န်ေ တာ် တို့  ရဲ့ 
Professional အဆင့်ေ ဆာင် ရွ က် မှု များ ကို
ယုံကြည်စိတ်ချမှု ရှိစေရန် ကျွန်တော်တို့သည် “အရည်အသွေး ”ကို ပထမဦးစားပေးပါတယ် ဒုတယိအဆင်မှ့ာ ထုတလ်ပုမ်ှု စွမ်းရည်နငှက့် ကို ည်ီသော ကုနက်ျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ် Myanmar Sheet Metal ရဲ့ သတ္တု ဖြတ်စက်ဟာ ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ကောင်းမွန်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင် တဲအ့ပြင် အရည်အသွေးရှိသော After Sale Service လည်းရှပိါတယ် ယခုလက်ရှိ မြန်မာနုငိင်ံ သံထုတ်လုပ်မှု စက်ပစ္စည်း ရောင်းချတဲ့ ဈေးကွက်မှာ စက်ကို ရောင်းချတဲ့အပိုင်းသာလျှင် အဓိ က အာရုံ စို က်ြ ပီး After Sale Service အပို င်း မရှိ တာ၊ အာမခံ ချက် မ ရှိ တာတွေ အများစုြ ကုံရပါတယ် ရှိ ခဲ့ လျှင် လည်း ရှု တ်ထွေးပြီး အချိန် ကုန်ေ စတဲ့ အဆင့်ေ တွများတာ အရည်အချင်းပိုင်း အားနည်းတာ တွေလည်း ကြုံတွေ့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ Myanmar Sheet Metal
ဟာ စက် ပ စ္စ ည်း များ ဝယ် ယူ အ သုံး ချမှုနှ င့် အတူ After Sale Service တို့  ကို
ယုံကြည်စိတ်ချစေပါတယ် ” ဟု ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားသွားသည်။ “စီးပွားရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခြင်း၏ အရေးပါဆုံးသော အချက်တစ်ချက်မှာ လုပအ်ားဖြစ်ပါတယ်၊ အတူတကွအလုပလ်ပ်ုခြင်းနှင့် ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်စေရပါမယ် အထူးသဖြင့် အတွေး အခေါ်ပုံ စံနှ င့် အလု ပ် လု ပ် မှု စွ မ်း ရည် ဟာ ထု တ် ကု န် များနှ င့် ဝန်ေ ဆာင် မှု ၏ အရည်အသွေး အပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်စေဖို့ အလွနအ်ရေးကြီးတဲ့ အရာနှစခ်ုဖြစ်ပါတယ် ထို့ အပြင် စက် ပ စ္စ ည်း အနေ နှ င့် လ ည်း ဝန် ထ မ်း ပု ဂ္ဂို လ် အပေါ် ကောင်း မွ န် စွာ တု န့် ပြန်နို င်ေ စရမယ် Myanmar Sheet Metal နဲ့ ထိငုးနုငိင်ံ Procurement ကုမဏ္ပ ကီလုပင်န်းဆိငုရ်ာလေ့ကျင်မှု့နငှ့် စက် ပ စ္စ ည်း ကြည့် ရှု စောင့်ေ ရှာ က် မှု များကို အစဉ် အ မြဲေ ဆာင် ရွ က်ေ ထာက် ပံ့ေ ပးပါတယ် ”ဟု ဦးရဲထွဋ်က ပြောကြားသည်။ M.P.E.C အတွက် Customer များ၏ လို အ ပ် ချက် များကို လို က်ေ လျာညီေ ထွေ သာ အရည်အသွေးရှိ ထုတက်နုပ်စ္စည်း များ ထုတ်လုပ်သည့်အပြင် Customer များ၏ လို အ ပ် ချက် များအပေါ် အာရုံ စူး စို က် ရ န် လို အ ပ် သ ည်
အြ ကံေ ပြး ခ င်း များ
ဖောက်သည်များ၏ လိအုပ်ချက်များကို အ များဆုံးကိကုည်ီစေရန်ဖြေရှင်းနည်းများအ ပါအဝင် Customer များကို နားလည်စေရန် တက်နငို သ်မျှ အသိပညာတိုးမြှငမ့် မျှုားကို ရှာေ ဖွ စီ စ ဉ်ေ ပး သ ည်ဖော်ြ ပ ပါ အ ရာ အားလုံး သည် တုံ့ ပြန် ချက်နှ င့် ဝေဖန် ချက်များကို ရိုးသားစွာလက်ခံသော အရေး ကြီးဆုံးအရာ ဟု ယူဆသည့် Customer
ဦးဇင်ကိုနိုင် ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး (Myanmar Sheet Metal Co., Ltd.) Myanmar Sheet Metal Co., Ltd ၏ စီ မံ ခ န့်  ခွဲေ ရးမှူ ဦးဇင်ကိုနငိုပြောကြားတာကတော့ “ အခုအချိနမ်ှာ မြန်မာနိငုင်ဟာံ ကဏ္ဍပေါင်း စုံ က လျှ င်ြ မန် စွာ ဖွံ့  ဖြိုး တိုး တက်ေ နပြီး စက် မှု လု ပ် င န်း ဟာလည်း ထို အ ထဲ မှ အရေးကြီး အခန်း ကဏ္ဍတစ် ခု ဖြစ် ပါတယ် စက် မှု လု ပ် င န်း တိုး တက် ဖွံ့  ဖြိုးလာတာနဲ့  အမျှ အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော စက်ပစ္စည်းများ လိုအပ်လာပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အနှစ် (၃ဝ)ကြာ ရပ်တည်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ Procurement Center Thailand နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖြစ် ပါတယ်၊ စက်ပစ္စည်း ရွေးချယ်ဝယ်ယူမှုတွင် After Sale Service ဟာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အတွက် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် After Sale Service ဝန်ဆောင်မှုကို ဦးစားပေးရပ်တည်ခဲ့တဲ့ Procurement Center Thailand နဲ့ ပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အကောင်းဆုံးနှင့် အာမခံမှု၊ တာဝန်ယူမှု အပြည့်ရှိသော After Sale Service ပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ” “Procurement Center Thailand Co., Ltd နှ င့်20 15မှ စ တ င် ပူးေ ပါ င်းေ ဆာ င် ရွ က် ခဲ့ြ ပီး စ က် ပ စ္စ ည်း များ ၊ ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးများ၊ တပ်ဆင်မှုများ နှင့် After Sale Service အတွက် လိုအပ်ချက်သည့် အရာများကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ် ၊ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီ ဦးတည်ချက်မှာ ကောင်းမွန်သော After Sale Service ပေးနိုင်ေရးဖြစ်ပါတယ် ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မြ န် မာနို င် ငံ မှာ စ က် ပ စ္စ ည်းေ ရာ င်း ဝ ယ် သူ များရှိေ သာ် လ ည်း များအသောအားဖြင့် ကောင်း မွ န်ေ သာ After Sale Services မပေးနို င် တာတွေ အားနည်း ချက် ရှိ တာတွေ တွေ့  ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့ ကုမဏ္ပ မှီ ရောင်းချသော စက်များတွင် အာမခံကာလ ( Warranty) ပါရှိပြီး အာမခံကာလအတွင်း After Sale Service အပြင် အာမခံကာလ ကျော်လွန်သွားပါကလည်း အကောင်းဆုံး After Sale Service ရရှိနို င် ဖို့  အတွ က် စိ တ် ချယုံြ ကည်နို င် မှာ ဖြ စ် ပါ တ ယ် ၊
ထို့  အ တွ က်ေြ ကာ င့်
ကျွ မ်း ကျ င်ေ သာ
အင်ဂျင်နီယာအဖွဲ့လည်း ဖွဲ့စည်းထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်” “ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီဟာ အနာဂါတ်မှာ လုပ်ငန်းရှင်များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် ထု တ် ကု န် စွ မ်း အား ကို ပို မြို မှ င့် တ င်ေ ပးနို င် မ ည့်လေ ဆာ ဖြတ် စ က် ကဲ့ သို့  နည်း ပညာမြင့် စက် များကို တင် သွ င်း ဖို့  လည်း ကြိုးစားနေပါတယ် ”ဟု ဦးဇင်ကိုနိုင် ပြောကြားသွားသည်။
ဆက်ဆံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (Customer Relationship management System) ၏ ရလဒ်ဖြစ်သည်။
JWD Group, Logistics ကျွမ်းကျင်သူနှင့်မြန်မာနုင်ိငံစက်မှုလုပ်ငန်းကဏ္ဍပေါ်အမြင်များ Logistics Expert Reveals the Vision upon Myanmar’s Industrial Sector
Mr. Charvanin Bunditkitsada CEO of JWD Group
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကြီးမားသောနိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ AEC စီးပွားရေးတံခါးဖွင့်
After major Myanmar’s reformation and ASEAN Economic Community
လာသည့်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ စီးပွားရေးတိုးချဲ့ရန်အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်ငံ
opening, it has made Myanmar the most captivated country for foreign
အဖြစ်စိတ်ဝင်စားလာကြသည်။ JWD InfoLogistics ကုမ္ပဏီလီမိတက် (အများပိုင်)
investors since they saw the potential in its economic expansion. In
ကုနုပ်စ္စည်းများသိုလှောင်ရေးကဏ္ဍနှင့် မြေပြင်ပေါ်ထောက်ပပံ့ေို ဆာင်ရေးကဏ္ဍများ
addition, JWD InfoLogistics Public Co., Ltd.; the Fully Integrated Inland
ကို ဝန်ဆောင်မှု အပြည်အ့ဝဆောင်ရက်ွပေးနေသည့် (Fully Integrated Inland Logistics
Logistics Service Provider is one of the companies that made investment
Service Provider) ကုမဏ္ပီဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာနုငိင်အံတွင်းတွင် သုံးနှစ်ကျော်ကြာရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
in Myanmar more than3years.
This article will reveal interesting vision of experienced investor in
အတွေအ့  ကြုံရင်ကျ့က်သည့်မြန်မာနုငိင်တံငွ်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေသူ JWD InfoLogistics
Myanmar, Mr. Charvanin Bunditkitsada, CEO of JWD InfoLogistics Public
ကုမဏ္ဗ လီမီိ တက်(အများပိငု)် ၏ ဥက္ကဋ္ဌ ခွနခ်ျဝနင်း ပန်တတိ် ဂရစ်စတာ၏အမြင်ရှူထောင့်
Co., Ltd. regarding Myanmar’s investment advantage and prominent
များကိုခိတွေကြည့်ရာတွင် ခွန်ချဝနင်းပန်းတိတ် ဂရစ်စတာသည် မြန်မာပြည်တွင် စီး
ပွားရေးများဆောင်ရကွလ်ာသည်အ့တွေအ့  ကြုံအရ မြန်မာနိငုင်အံတွင်းစီးပွားရေးရင်းနှီးမြှု ပ်နှံ ရ န်နှ င့် မြန် မာနို င် ငံ ၏ ထူးခြးချက် များတွ င် အ လွ န် စိ တ် ဝ င် စားစရာကောင်း သည့် အ ကြောင်း ပြောဆိုသွားပါသည်။
၂၁ ရာစုအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသုံးသပ်မှုနှင့်တောက်ပသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအခွင့်အရေး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းစီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများရှိလာသည့်နောက်
Analyze Myanmar in the 21st Century Upon the Vivid Investment Potential
ပုငိ်း ရင်းနှီးမြှုပ်နသှံ မျူား၏ ကုနသ်ယွလ်ပုင်န်းများဆိငုရ်ာနိုးကြားမှုသည်သသိသိာသာပြင်း
It must be admitted that not so long after economic and political
ထန် လာသည် မှာ လက် ခံ ရ မည်ြ ဖစ် သ ည် ၊ ထို သို့ြ ဖစ် ရ ခြင်း သည် ပ တ် ဝ န်း ကျင် အ ဘက်
reformation in Myanmar had been happened, investors’ attentiveness in
ဘက် မှ အ ချက် အ လက် များစုေ ပါင်းခြင်းကြောင့်ြ ဖစ် သ ည် ။ တည်ေ နရာ၊ မြန် မာနို င် ငံ ၏
trade seemed to significantly get even more severe. This derived from
နယ်နမိတ် အာဏာပါဝါ ကြီးသောနိုင်ငံတို့နဲ့ဆက်စပ်နေခြင်း၊ သို့မဟုတ်သယံဇာတပေါ
several surrounding factors together such as location, having the border
များကြွယ်ဝခြင်းစသော အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်အရင်းအနှီးမြုပ်နှံသူများသည် စီးပွား
connected to the great power country or richness in natural resource
which gave the capability to investors easily analyzing about the leap
ခွန်ချဝနင်းပန်းတိတ် ဂရစ်စတာ၏နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ မြန်မာပြည်သို့
growth in economic expansion.
လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည့် အကြောင်းရင်းများကို ပြောကြား ချက်တွင်စိတ်ဝင်စားစရာ
Mr. Charvanin Bunditkitsada said about interesting reasons when
ကောင်းလှသော ပြောကြားချက်တွင် “မြန်မာနုငိင်တွံင် စီးပွားရေးနှင့် နုငိင်ံရေးပြုပြင် ပြော
foreign investors turned to make investment in Myanmar “Not so long
င်းလဲမှုရှိပြီးနောက်တိုတောင်းသောကာလအတွင်း နိုင်ငံအသီးသီးက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ်
after Myanmar has had economic and political reformation, several foreign
စီး ပွားေ ရး ပိ တ် ဆို့  မှု များ ကြို ပ န် လ ည် ရု ပ် သိ မ်းြ ပီး ၊ြ မ န် မာနို င် ငံ အေ နနှ င့် လ ည်း
countries started following through the designated policy on free trading
နိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်များအား လွတ်လပ်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်လစီများကိုစတင်
with foreign countries in greater number deriving more international
ဆော င် ရွ က်နို င်ေ သာေြ ကာ င့် နို င် ငြံ ခား ပို င် ကု မ္ဗ ဏြီေ မာ က် များ စွာ လာေ ရာ က် ရ င်း
countries to make investment and potentiality to have new and old
နှီးမြှု ပ်နှံြ ကသည် ၊ အခြားသော ရင်းနှီးမြှု ပ်နှံ လို သူ အ သစ်ေ ရာအဟောင်း ပါမြန် မာနို င် ငံ
investors to make more investments in Myanmar as well.
အတွင်း ပိုမိုဝင်ရောက်လိမ့် မည်ကိုဖြစ်နိုင်ခြေများသည်။
Some distinctive investments were the investment in infrastructure
because it was considered the first thing that Myanmar needs to make
များဖြစ်ြ ပီးမြန် မာနို င် ငံ အတွ က် အနာဂတ် ကာလတွ င် စီး ပွားရေးများတိုး ချဲ့  မူ များနှ င့်
preparation to support economic expansion and growth rate of investment
အာရှက ရင်းနှီးမြုပ်နမှံ မျှုား ၏တိုးတက်မှုနှူန်းများကို အဆင်သ့င်က့ညူပီပံို့းပေးနုငိရ်န် ပထ
from Asia toward Myanmar in the future” said Mr. Charvanin.
မဦးဆုံးပြင်ဆင်ထားရမည်အ့ရာဖြစ်သည်၊” ဟု ခွနခ်ျဝနင်းပန်းတိတက်ပြောကြားသည်။
ထိအ့ု ပြင် ခွနခ်ျဝနင်းပန်းတိတက်အခြားအရေးကြီးသောထူးခြားသည်အ့ကြောင်းများ ကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖြည့်ဆည်းပြောကြားသည်။
Besides, Mr. Charvanin said about other additional advantages as well • Geographic Advantage – Myanmar connects South Asia and South
• ပထဝီအနေအထား မြန်မာနုငိင်သံည် တောင်အာရှနငှအ့် ရှေ့တောင်အာရှကဆို က်
East Asia regions up together as well as its border is next to China which
သွ ယ်ေ ပးလျှ က် ရှိြ ပီး ၊ ကမ္ဘာ့ြ သဇာအာဏာကြီး သောတရု တ်နို င် ငံနှ င့် လ ည်း နယ် န မိ တ်
is the world’s top great power country, therefore this makes Myanmar
ဆက်စပ်နေသောကြောင့် စီးပွားရေး လုပင်န်းရှငမ်ျားအတွက် မြန်မာ နုငိင်တံငွ်းလာရောက်
become the significant strategic point that investors should extensively
make trade and investment extension.
• လူဦးရေ မြန်မာနိုင်ငံသည် အလုပ်လုပ်နိုင်သည့်အရွယ်လူဦးရေများအများအပြားရှိ
• Population Advantage – Myanmar hasalarge number of working
သဖြင့် ကြီးထွားတိုးတက်မှုကိုထောက်ပံ့ စေမည့် အလုပ်သမား ပြဿနာများကိုကူညီဖြေ
age populations that can support incurred growth. However, Myanmar
ရှင်းနိုင်သည်၊ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မြန်မာလူမျိုးများသည် အထူး လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရ
people may be lack of specialized work skill, but if there are many
မည့်အပိုင်းများတွင် ရင်းနှီးကျွမ်းကျင်မှု အားနည်းနေပါသေးသော်လည်း အကယ်၍ နိုင်ငံ
investments coming from foreign countries or so called Joint Venture
ခြားသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများရှိလျှင် သို့မဟုတ် Joint Venture ဖက်စပ်များနှင့်ပူးပေါင်း
(JV), it will relay body of knowledge, cause system learning process and
ဆောင်ရကွလ်ျှင် အသိ ပညာနှငအ့် ခြားသောနည်းစနစ်များ အပါအဝင်လက်ဆင်က့မ်းသင်
elevate industrial capability.
ယူနိုင်ပြီး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းအဆင့်အတန်းကို အထက်တန်းကျကျတွန်းအားပေးနိုင်မည်ဖြစ်
• Logistics Advantage – with geographic advantage connected to the great power country and sea, it giveahuge advantage to Myanmar
သည်။ • Logistics သယ် ယူ ပို့ေ ဆာင် မှု သြဇာအာဏာကြီးသောနို င် ငံ ၏ နယ် နိ မိ တ်နှ င့် ပင်လယ်ပြင်တိုန့ှင့်ဆက်စပ်ခြင်းတို့သည် Logistics ပိုင်းတွင် အား သာမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ရေကြောင်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။
in term of Logistics particularly for ship transportation system. • Industrial Investment Advantage – entrepreneurs who want to make investment should pay attention to special economic zone because
• စက်မှုလုပ်ငန်းများရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များသည်
besides investment supports by government sector, special economic
အထူးစီးပွားရေးဇုန်ကို အာရုံစိုက်ထားသင့်သည်။၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အစိုးရ၏ရ
zone or industrial zone has readiness in term of basic factors more than
င်းနှီးထောက်ခံမှုကိုရရှိသည့်အပြင် အထူးစီးပွားရေးဇုန် သို့မဟုတ် စက်မှုဇုန်သည် အခြေ
other areas regardless of transporting route or electrical system.
ခံ ပို င်း ဆို င် ရာ အ ချ က် အ လ က် များ တွ င် လ မ်းေြ ကာ င်း ပို့ေ ဆာ င်ေ ရး မျာြး ဖ စ်ေ စ ၊ လျှပ်စစ်မီးများဖြစ်စေ၊ အခြားသောနေရာများထက်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်၊ ထုအ့ိ ပြင် ခွနခ်ျဝနင်းထပ်ပြောခဲသ့  ည်မှာ မြန်မာနုငိင်၏ံသဘာဝသယံဇာတအရင်းအ မြစ် များသည် ဖွ့ံြ ဖိုး တိုး တက် ရ န် အတွ က် အရေးကြီး အဓိ က အကြောင်း ရင်းဖြစ် သ ည် ၊ မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်ရှိသော သဘာဝ သယံဇာတများသည် ပြည့်စုံလျှက်ရှိပြီး၊ အသုံးမပြု ရသေးသည်မှာမြေက်များစွာကျန်ရှိနေသေးသသည်၊ ဤကဲသို့ သောအကြောင်းများကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံရန်အသင့်တော်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။
Mr. Charvanin also added that natural resource in Myanmar is considered another important factor toward the development, while Myanmar has richness in natural resources which have never been used before. All these elements make Myanmar suitable for investment.
Logistics, တွန်းအားပေးရမည့်မြန်မာနိုင်ငံ၏မြောက်များသောအခွင့်အရေး စီး ပွားေ ရး ရ င်းနှီြး မု ပ်နှံ မှု တွ င် L o g i s t i c sထော က် ပံ့ ပို့ေ ဆာ င်ေ ရး စ န စ် သ ည်
Logistics; Myanmar’s Overwhelming Opportunity that Needs to be Carried Forward!
ကုနက်ျစရိတမ်ျားကို သက်သာစေရန် အစမှအဆုံးအထိ အရေးပါသောယန္တရားဖြစ်သည်၊
In business investment, logistics system is considered the key
ထို့ေ ကြာင့် နို င် ငံေ တာ် ၏ အခြေခံ ဖွ့ံြ ဖိုးတိုး တက် မှု တွ င် အထူး သဖြင့် လျှ ပ် စ စ် မီး ၊
mechanism in term of cost reduction from upstream to downstream.
ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် အိမ်နီးနားခြင်း
Thus, the country’s infrastructure development particularly for electricity,
နုငိင်တံန့ို ငှရ့် င်ဘောင်တန်းနုငိေ်စရန် ရင်းနှီး မြုပ်နမှံ မျှုားကုဆိက်တငို က်ညူပီပ့ံိးု ပေးနုငိေ်စရန်
telecommunication and transportation is what Myanmar wanting to quickly
carry forward to match up with foreign countries in order to continuously
JWD သည် Logistics ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဖြင့်အပြည့်အဝဝန်ဆောင်မှုပေး နေသူဖြစ်ပြီး Supply Chain များကိုပါအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမှုများရှိနေသောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ Logistics သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး နှင့်ပက်သက်၍ ခြုံငုံသုံးသပ်ရလျှင် “ကျွန်တော်အမြင်အရ အခုမြန်မာနုငိင်ဟာံ အခြေခံအဆောက်အဦများ အထူးသဖြင့်
support the investment. In addition, JWD is the total solution logistics provider who has the most outstanding supply chain management so JWD revealed the overall image of logistics system in Myanmar
အာဆီယံနိုင်များသို့ ဦးတည်သော လမ်းမများတို့ကိုအရှိန်အဟုန်တည်ဆောက်နေလျက်
“I think at the moment Myanmar is rushing to develop infrastructures
ရှိပါတယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဟာစွမ်းရည် ရှိသောအစု ရှယ်ယာများနဲ့ ရထားလမ်း၊ သယ်ယူပို့
particularly ASEAN regional route which is the road to connect to several
ဆောင်ရေးဆိပက်မ်းတုက့ိိုခေတ်မဖှီြွံ့ ဖိုးတိုးတက်တည်ဆောက်နငို ရ်န် အဆင် သင့်ဖြစ်နေ
countries so now Myanmar is looking for partners who have capability
သည့် ရ င်းနှီးမြုပ်နှံ မှု များကို ရှာဖွေေ နလျက် ရှိ ပါတယ် ။ ဒီ လို လု ပ်ေ ဆာင် ချက်ေ တွ ကို
and readiness to join hands in the development of railways and good
ထောက်ရှု ခြင်းဖြင့် မြန်မာနုငိင်ဟာံ နုငိင်ဖြွံ့ ဖိုးတိုး တက်ရန်အတွကစ်တိအ်ားထက်သန်စွာ
transporting harbor. This development has proved that Myanmar has
အမြဲဆောင်ရွက် နေတယ်ဆိုတာမြင်သာ ပါတယ်။
good enthusiasm for developing its country.
Logistics ထောက် ပံ့ ပို့ေ ဆာင်ေ ရးစနစ်နှ င့်
For regional level, Myanmar also has policy to develop logistics
ပြည်တငွ်းခရီးသွား လုပင်န်းများဖြွံ့ ဖိုးတိုးတက်ရန်အတွကလ်ည်း ပေါ်လစီများချမှတထ်ားပြီး၊
system and domestic tourism by organizing logistics system and
ပြည်တွင်းမြို့များမှစတင်ခဲ့သည်၊ မြန်မာနိုင်ငံသို့ရောက်ဖူးလျှင် တွေ့ကြပေလိမ့်မယ်၊ အခု
developing tourism capability from inner cities. For those who used to
ပြည်တွင်းခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ အသုံးပြု နေကြတဲ့ကားတွေဟာ အစိုးရက
visit Myanmar should have seen more good condition transporting buses
ပုဂလ္ဂကိလုပင်န်းရှငမ်ျားတုက့ိို ကားမျိုးစံလုငို စ်င်များထုတ်ပေးပြီး ခရီးသွား ပု့ေိဆာင်ရေးနှင့်
for public transportation, while Myanmar government allowed private
ဆက် သွ ယ်ေ ရးများဖွံ့ြ ဖိုး တိုး တက်နို င်ေ စရန် အ တွ က် အားပေးထောက် ခံ မြှု ဖင့် အရည်
businessmen to register every type of vehicles which was aimed to develop
အသွေး အတော် အ တန်ေ ကာင်း မွ န် သ ည့် အ ဆင့်ြ မင့် ကား ကြီး များနဲ့  စတင်ပြေးဆွဲေ န
logistics, tourism and transportation systems. This derived Myanmar’s
logistics system become even more concrete.”
ပြည် တွ င်းဒေသအဆင့် များတွ င် မူ
မြန်မာနိငုင်ံ ထောက်ပပံ့ေို ဆာင်ရေးစနစ်ဆငို ရ်ာ စီးပွားရေး ရင်းနှီးမြုပ်နမှံ အှုပေါ် ခွနခ်ျဝ
In addition to the interest in logistics system investment of Myanmar
နင်းက အောက်ပါအတိုင်းပြောကြားထားသည်၊ “ယခုပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးများဟာ
businessmen, Mr. Charvanin said “Currently, there are big Myanmar
Logistics ထောက်ပံ့ပို့ ဆောင်ရေးရဲ့အရေးပါမှုကို စတင်သတိပြုမိလာကြပြီး၊ ပြည်တွင်း
businessmen starting to see the importance of logistics and turning to
ကု န် တ င် ပို့ေ ဆာ င်ေ ရး ရဲ့  ရ င်းနှီြး မု ပ်နှံ မူေ တွ ပါြ ပု လု ပ် လာြ ကြ ပြီ ဖ စ် ပါ တ ယ် ၊
make investment on domestic product transporting business which is
ဒီ လို အခြေအနေဟာ ပြုပြင်ပြောင်း လဲ မှု နဲ့  မြန် မာပြည် ရဲ့  Logistics ထောက် ပံ့ ပို့ 
considered as the effort to take Myanmar’s Logistics to the next level,
but it is still not good enough. I think the development in transportation
လည်း လံေုလာက်တဲ့ အနေအထားမရှေိသးပါဘူး၊ ခရီးသွားလာရေးနှငေ့် ထာက်ပပ့ံေို့ ဆာင်
and logistics systems are the top priority that Myanmar must continue
ရေး Logistics တို့  ဟာ စီး ပွားရေးရင်းနှီး မြုပ်နှံ လို သူ တို့  အ တွ က် အဓိ က ကျတဲ့ 
to rush on it because the readiness in logistics is the important factor
အေြ ကာ င်း ရ င်း တ စ် ခြု ဖ စ် တာေြ ကာ င့်ြ မ န် မာနို င် ငံ အေ န နဲ့ 
to influence decision making of investors.”
အ လျ င် အြ မ န်
JWD on the Verge of Making Investment in Myanmar
JWD နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရင်း နှီးမြုပ်နှံမှုခြေလမ်းများ မြ န် မြာ ပ ည် မှာ J W D ၏ စီး ပွားေ ရး လု ပ်ေ ဆာ င် ချ က်ေ တွ ကိုေ မြး မ န်း သ ည့် အ ခါ
In addition to JWD’s business operation in Myanmar, Mr. Charvanin
ခွန်ချဝနင်းက ဤကဲ့သို့ပြော ကြားသွားပါသည်၊ “Logistics ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို
said “Since JWD has been providing total solution logistics business over
ဝ န်ေ ဆာ င် မှု အ မျိုး မျိုြး ဖ င့် ၃ ၇ ခုနှ စ်ြ ကာ လု ပ်ေ ဆာ င် ခဲ့ သ ည့် J W D အေ န နဲ့ 
37 years, we are ready to support and set logistics standard in Myanmar
မြန်မာပြည်မှာရှိနေတဲ့ Logistics လုပ်ငန်းများခိုင်မာမှုရှိရန်၊ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုများကို
together with alliances as well as add the strength to support economic
ထောက်ပံ့ရန်၊ အောက်ခြေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အထက်တန်းကျကျစီးပွားရေးလုပ်
adjustment which at the end when logistics system has strength, it will
ငန်းများအဖြစ် အဆင့်မြင့် တင်ပေးနိုင်စေရန် မိတ်ဆွေများနှင့်အတူကူညီဆောင်ရွက်ပေး
help turning the lower class market into the upper class market. Since all logistics providers in Myanmar are Local transporting
ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါတယ်။ များသောအားဖြင့် မြန်မာပြည်တငွရ်ှိနေသော Logistics စီးပွားရေးလုပင်န်းများသည်
companies and there is no outsourcing service company or complete
Local ဒေသ ဆိုင်ရာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆင့်သာရှိပြီး၊ Outsourcing Service နှင့်
third parties offering this service, JWD who has already had business
Third Parties ကဲ့သို့ ပြီးပြည့်စုံသည့် ဝန်ဆောင် မှုများပေးသည့် ကုမ္ဗဏီမျိုးမရှိသေးပါ။
network based in Myanmar started joining hands with business partners
စီး ပွားေ ရး ကွ န် ယ က် များ ရှိေ နနှ င့်
in logistics business and offered the service for Myanmar customers in
ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ် ၃ နှစ်က Logistics ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို
the last2–3years. The market segment we aiming for are the frozen
အခြားသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်မဟာမိတ်များနှင့် စားသုံးသူတွေအတွက် စတင်ဖွင့်
food and other types in respectively as we think the growth rate of
လှစဝ်န်ဆောင်မှုပေးခဲပ့ါတယ်။ Market ပုငိ်းမှာ ကျွန်တော် တုအ့ိ ဓိကရည်မနှ်းထား တာဟာ
investment in Myanmar should continue to grow which this year we have
ရေ ခဲ စိ မ် အ စား အ စာ နှ င့် အြ ခားေ သာ လို အ ပ် တဲ့  အ စား အ စာ မျာြး ဖ စ် ပါ တ ယ် ။
made plan to expand business to ASEAN region. In addition, the business
မြန်မာပြည်ထဲက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု၏တိုးတက်မှုနှူန်းဟာ ဒီထက်မကတိုးတက်ဦးမယ်ဖြစ်ပြီး
we are operating at the moment is the investment on warehouse and
ဒီနှစ်အတွင်းမှာ အာဆီယံ သို့ စီးပွားရေးတိုးချဲ့ ရန် စီမံချက်ချထားပါတယ်။ ကျွန်တော်
cold storage construction projects in Myanmar because with all supporting
တို့အခုလက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတဲ့ အဓိကစီး ပွားရေးဟာ မြန်မာပြည် အအေးခန်း ကုန်
factors such as economy, politic and infrastructure development that
လှောင်ရုံဆောက်လုပ်ရေးရဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့
starts to get good formation, we can expect that Myanmar will definitely
အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး နှင့် ရုပ်ပုံလေးများစတင်ပေါ်လာတဲ့မြန်
getaleap growth for food business in the future.” said Mr. Charvanin.
အေ န နဲ့  လ ည်ြး မ န် မြာ ပ ည် အ တွ င်း
မာနုငိင်၏ံဖြွံ့ ဖိုးတိုးတက်မှု များကို အခြေခံတည်ဆောက်နေသည်ထောက်ဆပြီး အစားအ
The leap growth of Myanmar revealed the investment opportunity
စာနဲ့ဆိုင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဟာအနာဂတ်မှာ အရှိန်အဟုန် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည့်
and unlimited country development deriving from geographic advantage
မြန် မာပြည် ရဲ့  စီး ပွားရေးဖြစ် မ ယ် လို့  ခ န့်  မှ န်း ထားပါတယ် ” ခွ န် ချဝ နင်း က နောက်
which is considered to have high capability for inland and waterway
trading, while natural resources as well as labor are so ready for business
and industry operation with potentiality to become the major Logistics
နှ င့် အတို င်း အတာမရှိ သောတို င်းပြည် ၏ ဖွံ့ြ ဖိုး တိုး တက် မှု များကို မြင် သာစေသည် ။
hub of the region. Thus, if quality basic infrastructure development goes
ပထဝီအနေအထားအားသာချက်နငှ့်အတူ ကုန်သွယမ်ှု များအတွက် ကုန်းလမ်း၊ ရေလမ်း၊
very well, Myanmar will be able to take up oncoming economic growth
သဘာဝသယံဇာတများနှင့် စီးပွားရေးစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် အဆင် သင့်ရှိ
in accordance to the plentiful capabilities waiting to be transformed so
နေပြီးဖြစ်သောအလုပသ်မားများ အပါအဝင်ကြီးမားသောအလားအလာရှသိည်ဟဆုနို ငို ပ်ါ
the bright future of Myanmar will not be out of reach, if these
သ ည် ။
infrastructures development are seriously supported in continuity.
၏ေ ဒ သ ဆို င် ရာ အေ ရး ပါ အ ရာေ ရာ က်ေ သာ
ဖြစ်နိုင်ခြေအနေအထားရှိသည်၊ ထို့ကြောင့် အကယ်၍အရည် အသွေးကောင်းမွန်သည့် အခြေခံတည်ဆောက်မမျှုားရှလျှိင် တဖြည်းဖြည်းဖြွံ့ ဖိုးတိုးတက်လာနေသည့် စီးပွားရေးများ နှင့်အသွင်ေပြာင်းလဲရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်အလားအလာတို့ ကို ကူညီလုပ်ဆောင်ပေး နိုင်ပါလိမ့်မည်။မှန်ကန်သည့် အားပေးထောက်ခံမှုများဖြင့်အခြေခံတည်ဆောက်မှုများရှိ လျှင်တောက်ပသည့်မြန်မာနိုင်ငံ၏အနာဂတ်များသည် မကြာမီ အမှန်ဧကန်ရောက်ရှိလာ လိမ့်မည်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။
How to Make Production Plan to Get Low Cost and High Profit “ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်” သည် ထုတ်လုပ်မငလုပ်ငန်းစဉ်၏ထိရောက်မှုကိုရောင်
It cannot be denied that ‘production cost’ is the key factor to reflect
ပြန်ဟပ်စေသော အချက်ဖြစ်သည်ကိုမည်သူမျှမငြင်းပယ်နိုင်ပါ၊ ထုတ်ကုန်၏ဈေးနှုန်းသ
the performance of production process and designate product price, and
index to indicate the competitiveness particularly for the market with
ကွက်နငှ့်ဈေးနှုန်းစစ်ပွဲဖြင်ယ့ဥြှ် ပိုငသ်ည်၊ ထုတလ်ပုမ်ကှုနု ကျစရိတသ်ည် ပတ်သက်သော
intense competition and price war since the production cost covers all
ထုတ်လုပ်မှုအချက်အလက်များပါပါဝင်သည်၊ ပစ္စည်း၏ကုန်ကျစရိတ်၊ လုပ်အား ခ၊ပြည်
related production factors included materials, labors, public utility charges,
သူ့  အ သုံး အေ ဆာ င် အ မျိုး မျိုး ခ စ သ ည် တို့ြ ဖ စ် သ ည် ၊ ထို့ေြ ကာ င့် ထု တ် လု ပ် မှု ကု န်
etc. Thus, if entrepreneurs can effectively manage production cost, they
will get the low cost products that can compete in the market and
ဖြစ်သည်၊ အခြားသူများအားယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီး၊အမြတ် အစွန်းမြှင့်တက်မှုလည်းအကောင်အ
concretely increase the profit.
In addition, in order to get effective production cost in business
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင် ထိရောက်သော ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ရှိစေရန်ဆောင်
operation, entrepreneur or factory or establishment, owner needs to
ရွက်ရာတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်သည် အနာဂတ်စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်ရေရှည်တည်
make proper production plan to sustainably support business growth in
တံ့မှုတို့ကိုထောက်ပံ့ရန် သင့်လျှော် သောထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းကိုမရှိမဖြစ်ချမှတ်ထားရ
Why does production planning important?
အဘယ်ကြောင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းချရသလဲ ထု တ် လု ပ် မှု စီ မံ ကိ န်း (Production Planning) ဆို သ ည် မှာ - ထု တ် လု ပ် မှု
Production Planning is to make management plan for production
အချက် အ လက် များကို စီ မံ ကိ န်း ချရေးဆွဲ ရ န်ြ ဖစ် သ ည် ၊ ဥပမာ- လု ပ် အား(Man)၊
factors such as man, machine, material and method in order to serve
စက် ယန္တ ရား(Machine)၊ ကု န်ြ ကမ်း ပစ္စ ည်း (Material) နှ င့် ထု တ် လု ပ် မှု လု ပ် င န်း စဉ်
customer’s requirement very well regardless the demand occurred from
(Method)စသည်တို့သည် အမှန်တကယ်ဖြစ်သောအော်ဒါဝယ်ယူအားများမှဖြစ် စေ၊အ
actual purchasing order or demand occurred in the future although it
might have already had prediction in advance. Production planning can be divided into2criterions as follows
များကိုကောင်း မွန်စွာ တုန့်ပြန်နိုင်စေရမည်၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစီမံကိန်းကို (၂)မျိုး (၂) စားခွဲခြားထားနိုင်သည်၊ ၄င်းတို့မှာ-
• Long Term Planning (approximately3–5years)
• ရေရှည်စီမံကိန်း Long-Term (ခန့်မှန်းခြေ ၃-၅ နှစ်) အနာဂတ်တွင်စီးပွားရေး
This is the investment to support business growth in the future, for
လု ပ် င န်း ကြီး ထွား မှု ကို ထောက် ပံ့ ရ န် ရ င်းနှီးမြှု ပ်နှံ မြှု ဖစ် သ ည် ၊ ဥပမာ- စက် ရုံ များ
example planning to build up or expand factory or buy machineries,
ဆော က် လု ပ် မှု သို့  မ ဟု တ် တိုး ချဲ့  မှု စီ မံ ကိ န်းေ ရး ဆြွဲ ခ င်း ၊ စ က် ယန္တ ရား ဝ ယြ် ခ င်း ၊
personnel planning that mainly focus on increasing production capacity
ဝန်ထမ်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအားမြှင့် တင်မှုနှင့်လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်မှုကိုအဓိ
and expanding business. • Short Term Planning (approximately 12 months)
ကထားသည်။ • ရေတိုစီမံကိန်း Short-Term (ခန့်မှန်းခြေ ၁၂ လ) ၁၂ လအတွင်း အချိန်ကာလ
This is about making production plan based on specific time frame
အ မျိုးး မျိုး အ ရ ထု တ် လု ပ် မှု စီ မံ ကိ န်းေ ရး ဆြွဲ ခ င်း ၊ ဥ ပ မာ -နေ့  စ ဉ် ။ အ ပ တ် စ ဉ် ၊
within 12 months, for example daily, monthly, yearly production plan and
လစဉ်နငှ့်နစှစ်ဉ် ထုတလ်ပုမ်စှုမီကံနိ်းများစသည်တြို့ ဖစ်သည်။လက်ရထှိ တုလ်ပုမ်စွှုမ်းအား
etc. This plan will have more specific goal which is calculated from existing
ပေါ်မူတည်ပြီး၊ရှင်းလင်းသောရည်မနှ်းချက်သတ်မတှက်ာ ထုတလ်ပုမ်ထှုနိ်းချုပ်မ၊ှု လိကုလ်ံ
production capacity along with production control, monitoring, status
ကြည့် ရှု မှု ၊ ထု တ် လု ပ် မှု ၏ဖြစ် စ ဉ်နှ င့် အ ဆင့် အ တန်းနှ င့် အ တူေ ရရှ ည် ထု တ် လု ပ် စီ မံ ကိ န်း
control and production level based on specific time frame.
သင့်လျှော်သောထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းရွေးချယ်မှုသည် ပုံသေ သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းမရှိပါ၊ ထုတ်ကုန်၏သဘောသဘာဝ၊ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်များ၊ စက်ယန္တရားလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုအချက်အလက် အသီးသီးတို့တွင် မူတည်သည်၊ သို့သော်နောက်ဆုံးတွင် စီမံခန့်ခွဲသူများ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်သည်။
Selecting proper production plan has no rigid standard, but it will depend on product characteristic, production cost, machinery process and all production factors. However, eventually it will be up to the decision making of production manager.
The Type of Production Process Planning လုပ်ငန်းအော်ဒါထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်း
Job Order Production Planning
• Product tends to have more variety.
• Lesser production volume per time.
• စက်ယန္တရားပြောင်းလွယ်ပြင်လယွမ်ရှုိခြင်း၊လုပ် ငန်းစဉ်အမျိုးမျိုးသောထုတ်
• Machinery must have high flexibility and is capable of
ကုနမ်ျားထုတလ်ပု နိငု ခြင်း၊ ဥပမာ- CNC ပွတစ်က်(Lathe Machine)၊ Machining
processing product with several applications such as CNC machine,
Machining machine and etc.
• လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူသည်ကျွမ်းကျင်မှုရှိရ မည်၊ ထုတ်လုပ်မှုတည်းသော အထူးလုပ်ငန်း Special Center ဖြစ်ပြီး၊ဒီဇိုင်းသစ်များအမြဲ ပြောင်းလဲလျှက်ရှိခြင်း၊
• Operator must have specific skill because it is the 'Special Center' that is rarely produced and always haveanew design.
• ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်အသင့်အတင့်ရှုပ်ထွေး ခြင်း၊
• ထု တ် လု ပ် ချိ န် ကာလမသေချာခြင်း ၊လု ပ် င န်း အ ပို င်း အစအတော် အ တင့်
• Unpredictable production time frame.
• Considerably high cost work piece.
• သက်ဆိုင်သောဌာနများမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ရရှိသည်၊ အထူးသဖြင့်
• Require close collaboration from several related units
နည်း ပညာနှ င့် အင် ဂျင် နှီ ယာဌာန၊အဘယ်ေ ကြာင့် ဆိုေ သာ် ထု တ် လု ပ် မှု ကျွ မ်း
particularly for technique and engineering units because the process
requires highly skilled production.
စဉ်ဆက်မပြတ် သို့မဟုတ်များပြားသော ထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်
• ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားထုတ်လုပ်မှုနည်းပါးသော် လည်း၊တစ်ကြိမ်လျှင်အ ရေအတွက်များစွာထုတ် လုပ်ခြင်း၊ • သိုလှောင်ထားမှုအတွက် ထုတ်လုပ်မှုစီမံခြင်း၊
• Produce less product item withalarge volume per time. • Have production planning for stock inventory. • Use specialized machinery in production which offers high
• ထုတလ်ပုရ်ာတွငအ်ထူးစက်ကအို သုံးပြုဖြင်းဖြင့် အရည်အသွေးတိကျသော်
quality and precision, but require high cost of investment. Some
လည်းကုနက်ျစရိတမ်ျား သည်၊တစ်ချို့သောထုတလ်ပုလ်ငိုးက အလိုလျှောက် စက်
production lines use automated machineries, while others count
on labor skills.
• နေရာတစ်နေရာတွင်ရပ်တန့်မှုမရှိစေရန်၊နောက်လာ မည့်ထုတ်လုပ်မှုယူ
• Must have equal production time frame or adequate
နစ်၏လိုအပ်ချက်နှင့်အံဝင်ကွင် ကျဖြစ်ရမည်သို့မဟုတ်ထုတ်လုပ်မှုအချိန် တူညီရ
production capacity to meet the demand of the next production
unit which will cause no holdup at any point in production process. • ထုတ်လုပ်မှုကိုတိကျစွာစီမံကိန်းချထားနိုင်သည်၊
• Precisely make production planning.
• ထုတ်ကုန်အမျိုးအစားနည်းသောကြောင့်အခြားစံ နှုန်းချိန်စံများပြင်ဆင်ရန်
• Lesser type of products which gives enough times for
အချိန်ရှိသည်၊ • ထုတ်ကုန်၏တစ်ယူနစ်ဈေးနှုန်းသည်အသင့်အတင့် ပေါသည်၊ • ထု တ် လု ပ် မှု လု ပ် င န်း စဉ် သ ည် လျှ င်ြ မန်ြ ပီး ဆက် တို က် ဖြစ် သ ည့် အ တွ က် ထုတ်လုပ်မှုမှားယွင်းလျှင်တစ် Lot လုံးပျက်စီးသည်၊
preparation and related standard arrangement. • Product price per piece is quite cheap. • In case of error occurred in production, it will damage the whole Lot since production process has high speed and continuity.
• များသောအားဖြင့်ဈေးကွကတ်ငွလ်အို ပ်ချက်များ သောထုတလ်ပုမ်လှုငိုး သို့
• Mostly use in assembling line or to produce high demanding
မ ဟု တ် ထု တ် ကု န် များ အ တွ က် အ သုံြး ပု သ ည် ၊ ဥ ပ မာ -မော်ေ တာ် ကား ၊
product for the market such as cars, electrical appliances, consumer
လျှပ်စစ်ပစ္စည်း၊စားသုံးကုန် ပစ္စည်းများ စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်း၏ပါဝင်ဖွဲ့စည်းမှု / The Element of Production Planning Units
1. Customer Requirement Planning
၃. ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်း • လုပ်ငန်းစဉ် စီမံကိန်း • စက်ယန္တရား စီမံကိန်း • လုပ်အားစီမံကိန်း • သိုလှောင်မှု စီမံကိန်း
3. Production Planning • Process Planning • Machine Planning • Man Planning • Store Planning
ကုနထ်တုလ်ပုမ်ဘှုတ်ဂျက်ရာထားမှု
Execute Production Budget
Make Process Planning
Design Gripping Device
စက်ယန္တရားအသေးစိတရ်ှာဖွေမှု
Designate the List of Materials
Look for Detail of Machineries
Set Timing Standard in Production
ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲရာ တွင်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချရေး အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရ မည့်အရာ Things to Take Consideration in Production Planning to Reduce Cost
Set Production Schedule Table
ထုတလ်ပုမ်ှုနငှဝ့် န်ဆောင်မကှုဏ္ဍနှစခ်စုလုံးဆိငုရ်ာပြိုငဆ်ငို မ်သှုည်ပြင်းထန်မရှုသှိ ည်
It may be said that the severe competition in business both in
ထု တ် လု ပ် မှု
production and service sectors in term of quality, delivery and cost makes
နှငဝ့် န်ဆောင်မမျှုားကို စီမထံနိ်း ချုပ်ခြင်း၊ စသည်တို့ သည် ပြိုငဆ်ငို မ်စှုမွ်း ရည်တိးု မြှငမ့် တှုငွ်
production, service planning and controlling become the key role in
အရေးကြီးသောလက်နက်ဖြစ်လာသည်၊ အသေးစားစီးပွားရေး လုပ်ငန်း များ၊ထုတ်လုပ်
competitiveness increasing. For small business, production planning and
controlling may not be complicated which manager can make the plan
စီမံ ခန်ခ့ွဲ သူကယို တ်ငို စ်မီခံန်ခ့ွဲနငို သ်ည်၊သိ့ေုသ်ာအကယ်၍စီးပွားရေးလုပင်န်းကတိုးတက်
by using his/her own experience. However, if business is expanded with
a large volume of customers and more product and service variety,
ပိမုမျိုားပြားလာမည်၊စီမကံနိ်းရေးဆွဲရာတွငပ်မို ရို ပှုထွေးလာပြီး၊တစ်ယောက်ထဲစမီခံန်ခ့ွဲပြီး
planning will get more complicated which make it impossible to make
မဆုံးဖြတ်နိုင်တော့ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုသည်အခြား လုပ်ငန်း၏
plan and decision byacertain person because making production planning
အ ချ က် အ လ က်နှ င့် စ န စ် တို့  ကို အ တူ တ ကွ အ သုံြး ပု ထာြး ခ င်ြး ဖ စ် သ ည် ၊ ဥ ပ မာ -
has relationship and requires to share the same data with the system,
for example, purchasing order system, inventory management system,
repair & maintenance system, quality control system, personnel training
and development system, sale management , etc. This seems to happen
လျှောန့ည်းပြီးထုတက်နုအ်ရည်အသွေးကျဆင်းကာ ထုတလ်ပုမ်စွှုမ်း အားမြောက်များ စွာ
so many times when business is expanded or get bigger, but profit
generating rate is reduced or product quality is lessen or finished product
ဟုေ ခါ် ဆိုနို င် သ ည် ၊ ပို့ေ ဆာ င်ြ ခ င်းနှ င့် ကု န် ကျ စ ရိ တ် အ ရ ည် အေ သွး ၊
ထို့ေ ကြာင့် ထု တ် လု ပ် မှု လု ပ် င န်း စဉ် တွ င် ကု န် ကျစရိ တ်ေ လျှာ့ ချရန် စီ မံ ကိ န်းရေးဆွဲ မှု သည်လပုင်န်းရှငအ်ား ထုတလ်ပုမ်လှုပုင်န်းတိငုး အတွင်း ဆံုး ရှုးံ စေသောအရာများကြို မင်သာ
cannot be delivered on time despite the fact that it can produce much more products.
Thus, production planning to reduce production cost will allow
စွမ်းအားမြှင့်တင်ရန်ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်းရေးဆွဲမှုသည် အနာ ဂတ်ယှဉ် ပြိုင်မှုနှင့်ကိုက်ညီ
entrepreneurs to see the gap of production process that consumes
စွာရေတိုရောရေရှည်စီမံကိန်းပါသုံးသပ်ဆင်ခြင်ရပါမည်၊ လျှော့ချနိုင်သော ထုတ် လုပ်
production factors in each process so production planning to enhance
production cost efficiency may need good analysis and planning both in short and long term in accordance to competition condition in the market. In addition, the bottom line is that ‘reduced production cost means more
profit in return’.
ပစ္စ ည်း များအလိုအ လျောက် လွှဲပြောင်းမှု န ည်းပညာ နှ င့် လ က် ရှိ စီး ပွားရေးဖွံ့ြ ဖိုးတိုး တက် မှုAutomated Material Transfer Technology upon Economic Growth Trend 28
ပစ္စ ည်း များ အလို အလျောက် လွေှဲ ပြာင်းသော ကိ ရိ ယာသည် စ က် မှု လု ပ် င န်း အု ပ် စု တွ င်
ကျ ယ်ြ ပ န့်  စွာ
အ သံုးြ ပု သ ည် ၊
အထူး သဖြင့် ထု တ် ကု န် ပစ္စ ည်း များ ထိ န်း သိ မ်း သိေုလှာ င်ေ ရးနှ င့် သယ်ယူပေုိ့ ဆာင်ရေး၊ ကုန် ထုတ်လုပ်ေရးဆိုင်ရာ ထိရောက်မြှု ဖစ်ပြီး၊ ကမ္ဘာ လံုး ဆို င် ရာစက် မှု လု ပ် င န်း ကဏ္ဍများသည် သန် မာစွာ ကြီး ထွား တိုး တက်ရှေိ နဆဲဖြစ်ပြီး၊ ပြင်းထန်သော လွတလ်ပ်သည်စ့ီး ပွားရေးဈေး ကွကစ်နစ်အတွင်း တွငယ်ဥြှ် ပိုင်မှု ကဏ္ဍများနှငယ့် ဥြှ် ပိုငန်ငို ခ်သ့ဲ ည်။ ''ပစ္စည်း များအလိအုလျောက်လွေှဲ ပြာင်းသောကိရယိာ - ကမ္တာမ့ဟာ ဗျူဟာစီးပွားရေးအစီရင်ခစာံ'' သုတေသနလုပင်န်း အကြောင်းအရာအရပစ္စည်း များအလိအုလျောက်လွေှဲ ပြာင်း သောကိရယိာဈေးကွကသ်စ်တငွ် ဥရောပကအကြီးဆံုး ဈေး ကွကြ် ဖစ်သည်ဟု Global Industry Analysts Inc. ကကြေညာခဲသ့ည်။ အာရှ ပ စိ ဖိ တ် မှာ မူ အြ မ င့် ဆံုး ကိ န်း ဂ ဏ န်း
ပျမ်း မျှ နှ စ် စ ဉ် တိးု တက် နှု န်း (CAGR) ၏ ၇.၁%
လွှ မ်း မိုး နို င် ခဲ့ သ ည် ၊
အာရှ စီး ပွားရေးကြီး ထွားမှုေ ကြာင့် ကု န် ထု တ် လု ပ် မှု က ဏ္ဍချဲ့  ထွ င် မှု ၊ စဉ်ဆက်မပြတ် ကုနထ်တုလ်ပုမ်စှုမွ်း အားတိုး တက်မနှုငှအ့် ခြေခံအဆောက် အဦများဖြွံ့ ဖိုးတိုး တက်ရေးတွငြ် မှငတ့် က်လာသော ရင်းနှီး မြှုပန်မှံ မျှုားတိုး တက်လာသည်။ ထုတလ်ပုမ်ကှုဏ္ဍ၏လျင်မြန်စွာ အသွငက်ူး ပြောင်းမှုနငှ့် စားသံုး သူ၏ လိအုပ်သော ကြွဲ ပားခြားနားသည့် ထုတုက်နုမ်ျား၊ပြင်းထန်သောယှဥြ် ပိုင် မှုများသည် နည်းပညာ အသစ်များပြုပြင်အသံုး ချသောသူများ အတွက် ထု တ် လု ပ် မှု လု ပ် င န်း စ ဉ် တွ င် တွ န်း အာြး ဖ စ်ေ စ သ ည် ၊
အ ထိေ ရာ က် ဆံုးြ ဖ စ်ေ စ ရ န်
ဥ ပ မာ -
စ က် ရု ပ်ြ ဖ င့် အ လို
အလျောက်အလုပ်လုပ်ေစခြင်းနှင့် Smart Factories / IoT စက်ရုံ စသည်န့ည်းပညာများသည် အလိအုလျောက်လွေှဲ ပြာင်းမှုနည်းပညာ၏ အားသာချက်ကြို ဖည်ဆ့ည်းပေးနေသည်။
၂၀၂၀ ခုနှုစ်အတွင်း ကမ္ဘာဈေ့းကွက်က ပစ္စည်း များ အလိုအလျောက်သယ်ယူလွှဲ ပြောင်းရေး ပစ္စည်း ကိရယိာများ၏ကြီးထွား တိုး တက်မကှုို အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ပေါင်း ၃.၄ ဘီလယီအံထိ သတ်မတှခ်ျက် ချထားသည်၊ ထုတုလ်ပုမ်တှုငွထ်ေိရာက် သောထုတလ်ပုမ်စှုမွ်း ဆောင်ရည်တိးု တက်စေရန်ကြီးထွားမှု မှဖအိားများကမောင်းနှင် ဆောင်ရကြွ် ပီး၊ အလိအုလျောက်နည်းပညာ၏အခန်း ကဏ္ဍချဲ့ထွငမ်ကှုလို ည်း သက်ရောက်မရှို The world market has set the goal of automated material transfer device growth at 3.4 million US dollars within 2022 which will be propelled by the pressure from the growth forcing entrepreneurs to improve their manufacturing performances and at the end, this will drive the expansion in the role of automated technology.
အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းမှုနည်းပညာ၏အနာဂတ်တွင်အရေးကြီးသောကဏ္ဍ ဖွံ့ြ ဖိုးဆဲေ ဈးကွ က် များ၊ ထု တ် လု ပ် မှု က ဏ္ဍအပေါ်မှာ ပိုြ ပီး ဖိ အားပေးရန်ြ ကိုးစားနေဆဲ များတွ င် ပို့  ကု န် စ က် မှု လု ပ် င န်း များဖွံ့ြ ဖိုးတိုး တက်ေ ရးသည် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ကုန်ကျစရိတ်နိမ့်သော ကုန်ထုတ် လုပ်မှုဖြင့်ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး အတွက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ထို့ ကြောင့် နည်း ပညာကို အ ဘက် ဘ က် မှ လက် ခံေ နသောစီး ပွားရေးလု ပ် င န်း များ၊ ဥပမာ- ထု တ် လု ပ် မှု လု ပ် င န်း စဉ် လွ ယ် ကူေ စရန် ပစ္စ ည်း များအလို အလျောက်လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ထုတ်လပ်ုမှုလပ်ုငန်းစဉ်များပြုပြင်ခြင်းနှင့်ကုန်ကျစရိတ်လျှော့ချခြင်းဖြစ်သည်၊ ပစ္စည်း များအလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းမှုသည် လူ့လုပ်အားအစားထိုးမှုပေါ်တွင်အာရုံစိုက်ပြီး၊ အဆိုပါစနစ်သည်ဈေးကွက် ထဲတွင်အသုံးချရန် အပြုသဘောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်စေသည်။
မူရင်းနေရာပြန်လည် ထားရှိမှု Return Material Back to the First Place
လူလုပ်အား Human Labors
ပစ္စည်းများအလိုအ လျောက်လွှဲပြောင်း နည်းပညာ With Automated Material Transfer Technology
Improve Work System
က မ္ဘာ တ ဝှ မ်း စ က် ရုံ များ ထု တ် လု ပ် မှု များ စ ဉ် ဆ က် မြ ပ တ် တိုး ပွား လာ မှု ၊
Automated material transfer devices are widely used in industrial
အလုပ်သမား လူဦးရေ ပြောင်း လဲမှုများ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်စေသည့်လုပ်
group particularly in term of product inventory, control and
င န်းေ ဆာ င် ရွ က် မှု များေ ပါ် အာ ရုံ စို က် မှု များ သ ည် လူ လု ပ် အားြ ဖ င့် ပ စ္စ ည်း
transportation as well as manufacturing performance seeking. In
သ ယ်ေ ဆာ င် လွှြဲေ ပာ င်း ရာ တွ င်
addition, the world’s industrial sector tends to grow strong against
ရှု ပ်ေ ထွး မှု ပို မို တိုး
ြ မှ င့်ေ စြ ပီး ၊
အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းမှုလို အပ် ချက်ကိုတိုက်တွန်းပေးသည်။
intense competition sector in free market economic system.
ထို့  အပြင် ဝယ် လို အားသည် အီ လ က် ထ ရွ န်း နစ်နှ င့် W i-Fi နည်း ပညာများ
From research report under the topic ‘Automated Material Transfer
တိုးတက်လာမှု၊ ရေရှည်နည်း ပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများ ကြောင့်ဖြစ်လည်းသည်၊
Device: The World’s Strategic Business Report’ announced by Global
ဥပမာ- မောင်းသူမဲ့သောစက်ရုပ်ယာဉ်၊ စက်ရုပ်၊ လွတ်လပ် သောထိန်းချုပ်မှုအတွက်
Industry Analysts Inc. indicated that for the new market for automated
ကိရယိာတန်ဆာပလာများ၊နှင့် လူခ့  န္ဓာကိယုအ်စိတအ်ပိငုး အသီးသီးတိတ့ု ငွတ်ပ်ဆင်
material transfer devices, Europe dominates the biggest market share
နိုင်သော အသေးစားကွန်ပျူတာ၊များသည် ပစ္စည်းများအလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းမှု
of the world at the moment, while Asia Pacific dominates the highest
စနစ် နှင့်အတူ အရည် အသွေးမြင့်မားသော တီထွင်ခံရနည်းပညာများကို မောင်း
average growth rate figure per year (CAGR) at 7.1% deriving from
Asia’s economic growth, expansion of manufacturing sector,
continuously increasing in productivity and investment acceleration in manufacturing infrastructure development.
The continuous growth in the volume of manufacturing factories across the globe, change in the number of labor populations as well as
The rapid change of manufacturing sector and demand in more
effort to add more safety to work condition that made material transfer
product variety of consumers as well as intense competition are the
by human labor getting more complicated which stimulated the higher
repulsion force for all related stakeholders in the market to apply new
demand in automated material transfer devices.
technologies to achieve highest performance process which technologies such as automated operation robot and smart factories/IoT are propelling the strength of automated transfer technology.
Besides, such demand was caused by the advancement in electronics and wireless internet technology. In the long run, advance technologies such as autonomous vehicle, tools for independent control and tiny
Important Role of Automated Material Transfer Technology in the
computer device that can be installed in any part of human body are
expected to propel the trade value of automated material transfer system
Export industry development in developing market is trying to add pressure to manufacturing sector in order to maintain competitiveness in
along with other technologies that are developed to gain higher performances.
the world trade with high quality product manufacturing in lower cost. Thus, business is widely opening for several technologies such as automated material transfer in order to make manufacturing process much easier,
improve productivity and reduce cost which automated material transfer will focus on replacing human labor and the positive factor that has the influence to the way to apply it with the market.
‘ကြုတင်ိကာကွယ်ခြင်းသည် ပြုပြင်ခြင်းထက် ပိုကောင်းသည်’ နိုင်ငံခြားမှစက်ရုံအတွင်းမတော်တဆဖြစ်မှု၏ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာချက် ‘Prevention is Better than Cure’ Case Study of Factory Accidents in Foreign Countries
၂၀၁၅ ခုနစှ် တရုတန်ငို င်ံ ထိန်း ဂျင်း(Tianjin) ဆိပက်မ်းစက်မဇှုံ အ တွ င်း
ဓာ တု ပ စ္စ ည်း
သိေုလှာ င် ထား
ေ သာ ဂိေုဒါ င်
ပေါက်ကခွဲေဲ့ သာဖြစ်ရပ်သည်၊ ကမ္ဘာအနှတ့ံ ငိုး ပြည်များအားနိငုင်၏ံလုံ ခြုံရေးဆိငုရ်ာ စံချိနစ်ညံနွှ်း များ နှငလ့် ပှုရ်ှားမှုများကိအုာရံစုး စိကုေ်စခဲ့ သည် ။ ဤအဖြစ် ဆိးု သည် ကျယ်ြ ပန်ေ့ သာသက်ေ ရာက် မြှု ဖစ်ြ ပီး ၊ လုပ်ငန်းရှင် များလူမှေုရးအသိုင်း အဝိုင်း တွင် အမြဲသတိထားအဓိက အေြ ကာ င်း ရ င်ြး ဖ စ် လာ သ ည် ၊ဒေ သ ခြံ ပ ည် သူ များ အားဘေး ဒဏ်သင်စေ့သောကြောင်ြ့ ဖစ်သည်။ အဆိပုါအဖြစ်အပျက်ကြောင့် လူ ၁၀၀ ကျော်အသက်ဆုးံ ရှုးံ စေပြီး၊ ရာချီပြီး အိုး မဲ့အိမ်မြဲ့ ဖစ်ခဲ့ရသည်၊ အဆိပုါပေါက်ကမွှဲေု ကြာင့် အနီးအနားရှရိပ်ရွာ များအား ပျက်စီး စေပြီး၊ တန်ဖိးု မဖြတ် နိငုေ်သာ အသက်နငှပ့် စ္စည်း ဥစ္စာဆံုး ရံှးု မှုများဖြစ်ပေါ်စေ သည်။ ဤဆောင်းပါးသည် နိငုင်အံသီးသီး၏စက်ရအုံ တွင်း မတော်တဆ ဖြစ်မမျှုား ဆိငုရ်ာဖြစ်ရပ်မနှ် အကြောင်း ရင်းများကိစုေုဆာင်းထားသည်။ ရည် ရွ ယ် ချက် မှာ မြန် မာနို င် ငံ စက် မှု လု ပ် င န်း လု ပ် င န်း ရှ င် များနှ င့် အြ ခား သ က် ဆို င် ရာ က ဏ္ဍ များ အား လံုး အား
ဘ က် စုံ
မတော်တဆထိခိုက်မှုများ ကာကွယ်တားဆီးရေး၏အရေးပါမှုကိုမီး မောင်းထိုး ပြရန်ဖြစ်ပါသည်။ The explosion of chemical warehouse in Tianjin harbor industrial park, China in 2015 has caught attention of the world regarding the country’s standard and safety activities. This tragedy gave broaden impact and turned out to be social issue that entrepreneurs should be aware of since people in the area suffered from this explosion as it killed more than 100 victims, while hundreds of people were homeless. Thus, the explosion has caused inestimably loss for both lives and assets. This article has gathered the causes of accidents occurred in factories which are case studies from several countries. The objective for this article is raise awareness on the importance of omnidirectional accident prevention for Myanmar’s industrial factory entrepreneurs and every related sector.
မတော်တဆဖြစ်မှုဖြစ်ရပ် လေ့လာချက် Case Study of Accidents စက်ရမုံီး လောင်ထကွ် ပေါက်မရြှိ ခင်း
၂၀၁၂ ခုနစှ၊် ဘင်္ဂလားးဒေ့ရစ်ှ က်ရမုံီး လောင်မ၊ှု ဘင်္ဂလားဒေ့ရန်ှ ငို င်၌ံစက် ရံဖုက်ရငှထ်တု ကုနုမ်ျားထုတုလ်ပုေ်သာ
Factory has no fire exit.
Tazreen စက်ရုံ တွငမ်ီး လောင်ပြီး၊ စက်ရုံ အလုပုသ်မား ၁၁၇ ဦးသေ ဆံုး စေသည်။ Factory Burnt Down in Bangladesh In 2012, the fire broke out in Tazreen factory which was fashion product manufacturing factory in Bangladesh. At least 117 people were confirmed dead.
မီးသတ်ပစ္စည်း ကရိယာများမလံေုလာက်ခြင်း The number of fire extinguishers is not enough.
၂၀၁၆ ခုနုစှ၊် အိနယ္ဒိ နိငုင်ဓာံတုပုစ္စည်း စက်ရေုံ ပါက်ကြွဲ ခင်း၊ အိနယ္ဒိ နိငုင်ံ မွနဘ်ငိုး မြိုတ့  ငွ် ဓာတုပုစ္စည်း စက်ရေုံ ပါက် ကွမှဲေုကြာင့် လူငါးဦးသေဆံုး ခြဲ့ ပီး၊ 120 ဦးကျော်ဒဏ်ရာ ရခဲသ့ည်။ အဆိပုါပေါက်ကမွှဲေု ကြာင်အ့နီးအနားရှအိးု အိမမ်ျား၏ မှနမ်ျားအားကွအဲက်စေသည်၊
စက်ရအုံ တွင်း ရေနွေးငွေ့
ထိအ့ု ပြင် ဓာတုပစ္စည်း များမီးလောင်ရာမှ မီးခိုး များသည်
ထုတုစ်က်ယယို ငွ်း ပျက်စီး ခြင်း
အများပြည်သအူားအသက်ရှူ မှုတငွသ်က်ရောက်မရှုှေိ စသည်။ Chemical Factory Explosion in India In 2016, there was an explosion inside chemical factor in
Malfunctioning steam generator in factory.
Mumbai, India. There were5dead people and 120 injured, while the blast shattered the mirrors of nearby buildings and houses. Besides, the smoke from chemical combustion caused trouble breathing to people.
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံစက်ရုံကြမ်းပြင် ပြိုကျခြင်း၊ကမ္ဘောဒီးယားနိုင် ငံ တွ င်
Nishiku Enterprise အထည် ချုပ် စ က် ရုံြ ကမ်းပြင်
စက်ရ၏ုံ ကွနက်ရစ်ကြမ်းပြင်
ပြိုကျပြီး၊အလုပ်သမား ၄ ဦးဒဏ်ရာရှိ စေသည်။ Factory Collapsed, Cambodia Nishiku Enterprise apparel manufacturing factory’s floor was collapsed in Cambodia. There were4injured from
သံမဏိမရြှိ ခင်း အကြောင်းရင်း Cause
Factory’s concrete floor was built without support steel.
အလုပုသ်မားဂဟေဆော်နေစဉ်ဓါတ်
ငွေဗ့ူး ထဲကျန်ရစ်နေသောဓါတ်ငွေန့  ငှ့်
တောင်ကိုးရီးယားနိုင်ငံ Hanwha Chemical ဓာတုစက်ရုံ
မျှောတက်လာသောစွနပ့် စ်ပစ္စည်း မီး
ပေါက်ကွဲမှု ကြောင့်အလုပ်သမားအနည်းဆုံး ၆ ဦးနှင့် ၁
တောက် နှငထ့်ေိ တြွ့ ပီး ပေါက်ကမွှဲု
Chemical Factory Explosion in South Korea Hanwha chemical factory in Korea was exploded which
Suspect the leftover gas in the waste tank float up to strike against the flame while worker were welding the
caused at least6dead people and 1 injured.
metals, and caused the explosion.
ပါကစ္စတန်စက်ရုံမီးလောင်ခြင်း၊ ပါကစ္စတန်တွင်ဖိနပ်စက်ရုံမီး လောင်မှု ကြောင့်၊ လူ အနည်းဆုံး ၂၃ ဦးသေ ဆုံးပြီး၊
ဂျင် နီ ရီ တာစက် ပ တ် လ မ်း တို (Short
ဒဏ်ရာများစွာရရှိသည်။ Factory Burnt Down in Pakistan Shoe manufacturing factory in Pakistan caught fire which
Circuit) ဖြစ်ပေါ်သည် အကြောင်းရင်း Cause
Generator’s short circuit.
caused at least 23 dead people and several tens injured.
စက် မှု လု ပ် င န်း ခွ င် အ တွ င်း တွ င် မတော် တ ဆဖြစ် မှု သ ည် သတိ မ ထားလျှ င် ၊
In addition, accidents in industrial factory can happen at any time if a
သို့မဟုတ် စီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ပေါ့ဆမှုရှိလျှင် မည်သည့်အချိန်တွင် မဆိုဖြစ်ပျက်နိုင်သည်၊
person is careless or there is recklessness in safety management. Thus, it is
ထို့ေ ကြာင့် ‘ကြို တ င် ကာကွ ယ်ြ ခင်း သည် ပြုပြင်ြ ခင်း ထက် ပိုေ ကာင်း သည် ’
better to prevent rather than cure it later because if the accident has
happened, it will always lead to the loss in live and assets which we might
not be unable to get them back for good. Source: https://goo.gl/GF9neV http://news.voicetv.co.th/world/369849.html http://goo.gl/H92Oum
Food ERP, ထိရောက်သော အစားအစာသက် တမ်းကာလဆိုင်ရာစီမံခန့်ခမွှုဲ Food ERP: Effective Management Planning for Food’s Life Spa စားနပ် ရိ က္ခာ နှ င့် ဆ က် စ ပ်ေ သာ စီး ပွားရေးလု ပ် င န်း သည် ကု န် ကျစရိ တ် ဈေးနှုန်းဆက်လက် မြင့်မား သော သော်လည်း၊ အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်ရရှိရန် ထု တ် ကု န်ေ ဈး နှု န်း တိုြး မှ င့်ြ ခ င်း သ ည်ရေ ရှ ည် ကာ လ အ တွ က်ကော င်း မွ န်ေ သာဖြရှ င်း ချက် မ ဟု တ် ပါ၊ ကောင်း မွ န် စွာ ထည့် သွ င်း စဉ်းးစားကြည့် လျှ င် ထိရောက်မှုရှိသော ဖြေ ရှင်းချက်မှာ အတွင်းရေးကုန်ကျစရိတ်ပြဿနာများဖြေ ရှင်းခြင်ဖြင့ဆ်ုံးရှုံးခဲဖူ့း သောအမြတ်အစွန်းများကို ပြန်လည်အစားထိုးရရှိစေနိငုသ်ည်။ စား န ပ် ရိ က္ခာ ထု တ် လု ပ် မှု လု ပ် င န်း စ ဉ် များ တွ င်ြ ပဿ နာ များ အ တွ က် ကောင်း မွ န်ြ ပီး သင့်ေ လျှာ်ေ သာ ဖြေရှ င်း ချက် သ ည် ရေရှ ည် ကာလတွ င် အ ကျိုး အမြတ်ကရို ရှိစေနိငုသ်ည်၊ ထုတလ်ပုမ်လှုပုင်န်းစဉ်တငွ် ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိငု သောအချက်မှာ အလွန်သိမ်မွှေ့နူးညံ့မှုရှိသည်၊ ပိုးမွှာများ၊ ဘက်တီးရီးယားများ နှော က် ယှ က် မှု ၊ (သို့  မ ဟု တ် ) ကု န်ြ ကမ်း ပစ္စ ည်း ၏သက် တ မ်း ၊တို့  သ ည် အလွ န် သိမ်မွှေ့နူးညံမ့ရှုသှိ ည်၊(သိမ့ု ဟုတု)် (သိမ့ု ဟုတု)် နိယာမဖြင်က့ညီူထောက်ပမံ့ အှုဖြစ် ဖြ စ်ေ ပါ်ေ သာ ကု န် ကျ စ ရိ တ် ကို အြေ ခ ခံြ ပီးေ အာ က် ပါ အ တို င်း ၃အုပ်စုခွဲခြားထားနိုင်သည်။
ပါဝင်ဖွ့စဲ ည်းမှု စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်အချုိး
54% ဖေါ်ြ ပ ပါ အ ချ က် အ လ က် များ အ ရ
လုပ်အားခ Labor Cost
ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းမှု စရိတ်နှင့်အခြားသော
Maintenance and Miscellaneous Cost
ကု န် ကျ စ ရိ တ် အ များ ဆုံး သ ည်
ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း၏အစိတ် အပိုင်း ဖြစ်ပြီး၊လုပ်အားခသည်အနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း တွေ့ြ မ င်နို င် သ ည် ၊ ထို့ေြ ကာ င့် တ တ် နို င် သ မျှ ကု န် ကျ စ ရိ တ် ထိေ ရာ က် စွာ စီမခံန်ခ့ွနဲငို သ်ည်အ့ရာသည် ကုနြု ကမ်းပစ္စည်းနှင့်ပြုပြင်ထနိ်းသိမ်းမှုအစိတအ်ပိငုးဖြစ် သည်။ သယံဇာတများနှင့်ပြုပြင်ထနိ်းသိမ်းမှုလပုထ်ုံးလုပန်ည်းများကို အကောင်အထည်
ဖေါ်စီမံခန့်ခွဲမှု ပြုလုပ် ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာ လုိုက်လံ စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှု
ရော င်း ရ န် ချ ထားေ သာ အ စား အ စာ များ သ က် တ မ်း ဆို င် ရာ စီ မံ ခ န့်  ခွဲ မှု သ ည်
ထိန်း သိမ်း ခြင်း၊ အချက်အလက်များကိပုမုံ နှ် အကြောင်းကြားပြီး၊ချက်ချင်းထုတုေ်ဖ်ါခြင်း
ထု တ် ကု န်ြ ပ န် ပို့  မှုနှ င့် အေြ ကွး ယူ န ည်း အ သုံြး ပု မှု တို့  ကို န ည်း ပါးေ စ သ ည် ၊
ဤအချက်အလက်များသည် ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များပေါ် မူတည်သည်၊ ထုတ်ကုန်အရ သတ်မျတ်ချက်များကွဲပြားခြားနားသည်၊ကုန်လှောင်ရုံလက်ကျန်ထုတ်
ဤ အ ပို င်း တွ င် လု ပ် င န်းေ ဆာ င် ရွ က် မှု စွ မ်း ရ ည် ပို မို ထိေ ရာ က် မှု အ တွ က်
ကုန်များစီ စဉ်ရာတွင် First – Expire – First – Out (FEFO) စနစ် သို့မဟုတ်
လူသားအစား ပရိဂုရမ်ကို ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိငုသ်ည်၊ အားလုံး ၆ ချက်ခွဲခြားနိငြု ပီး၊
သက်တမ်းကုနုခ်ါနီးထုတုက်နုမ်ျား ယခင် ထက်ပမိုေို ရာင်းချနိငုမ်စှုနစ်ကအို သံုး ပြုသည်၊
သက် တ မ်း ကု န် ဆုံးနေ့ များခန့်  မှ န်းနို င် ရ န် သက် ဆို င် ရာ အစားအစာ ၏သက် တ မ်း ကုနုဆ်ုံးနေ့လကို လ်စံစ်ဆေးမှုတငွအ်လေးထားဆောင်ရကွရ်မည်၊ကောင်းမွန်သောစီမံ
သက်တမ်းကုနခ်ါနီးသောကုနြု ကမ်းပစ္စည်း သိမ့ု ဟုတု ထုတုက်နုမ်ျားရွေးချယ်အ
ရောက်စွာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရုံသာမက အချိန် ကြာပိုမိုမြင့်စွာရောင်းချနိုင်သည်။
သုံးပြုမှုသည် ကုနြ် ကမ်းများ၏ အခြေခံစမီခံန်ခ့  မွဲ ၏ှုအခြေခံပညာဖြစ်သည်။လက်ကျန် ထုတ်ကုန်မျာကို စောင့်ကြည့်ခြင်း နှင့်စာရင်းများစစ်ဆေးခြင်းသည် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း
များဆုံးရှုးံ မှုကိုအဓိကသက်ရောက်မှုရှိသည်၊ သက်တမ်း ကုန်မှုတွက်ချက်ရာတွင်
ထိရောက်မရှုှေိ သာအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများနှငပ့်ါဝင်ပစ္စည်း များဆိငုရ်ာစီမခံန်ခ့ွဲ
ကောင်း ဆုံးသောနည်း လမ်း တစ် ခု မှာ ကု န် သိုေ လှာ င် ရုံ အ တွ င်း ကု န်ြ ကမ်း ပစ္စ ည်း
မှုသည်သတ် မှတ်ချက်ပြောင်းလဲနိုင်မှုအောက်တွင် အကျိုးအကြောင်းဆီလျှော်စွာဖြင့်
လက်ခံဝင်လာ သောနေ့မှစတင်တွက်ချက်ခြင်း သို့မဟုတ် သေချာသောသက်တမ်း
ကု န်ြ ကမ်း များရွေး ချယ် မှု တွ င် ကု န် ကျ စရိ တ် များကို ထိေ ရာက် စွာလျှော့ ချနို င် သ ည် ၊
အမှန်ကိုခန့်မှန်း နိုင် ရန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ကုန်ကြမ်းများနောက်ဆုတ်ပြန်
ဥပမာ- အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းပါဝင်ပစ္စည်း များရွေးချယ် ခြင်း၊သို့မဟုတ် အစား
ထိုးအသုံးပြုနိုင်သောအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သည်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ကြိုတင်ကာ
ကွယ်မှု မဟာဗျူဟာကိုပိုပြီးအလေးထားသည့်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်သည်၊စွန့်ပစ်ရန် စောင်ဆ့ငိုးနေသော ထုတု လုပုမ်ကှို အလေးထားခြင်းဖြင်သ့က်တမ်းကုနုခ်ါနီးသော ကုန်ကြမ်းများကို အရင်အသုံးချခြင်းကိုဦးစားပေးသည်။
၅. ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများအတွက်စီမံခန့်ခွဲမှုသည် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အစားအစာထုတ် လုပ်မှုတွင်အရေးကြီးသောသော့ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်၊ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကလ၏ ပြင်ပအချိန်ဖြစ်လျှင် မတော်တဆဖြစ်မှုမှ ထုတ်
လုပမ်လှုပုင်န်းစဉ်၏ဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိငုသ်ည်၊ ကုနြ် ကမ်း ပစ္စည်းများနှောင့်နှေးမှုများဖြ
ထုတုလ်ပုမ်လှုပုင်န်းစဉ်ကထိုရောက်စွာစီမခံန်ခ့ွဲနငို မ်သှုည်ဖြစ်ပေါ်မည်က့နုက်ျ
စ်စေပြီး၊သယ်ယူပို့ဆောင်မှုတွင်နှောင့်နှေးနောက်ကျစေနိုင်သည်၊ စီးပွားရေးလုပ် ဖော်
စရိတအ်ပါအဝင်အကျိုးရလဒ်ကခို န်မ့  နှ်းခြင်းဖြစ်တတ်သည်၊ လုပုင်န်းစဉ်နငှက့် နုက်ျ
စရိတ်ထိန်းချုပ်မှုတိုးတက်စေရန် အတွက်ဖြစ်သည်၊ အကယ်၍ရလဒ်ခန့်မှန်းခြေ သည်မြောက်များစွာမှားနေလျှင် အဆိပုါပြဿနာကိခွုဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန် လိအုပ်သည်၊
အရင်းအမြစ်နှင့် အကောင်အထည် ဖော်မှုနည်းလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ရမည့်အပြင်
လုပုင်န်းစဉ် အသီးသီးဆိငုရ်ာအချကအ်လက်များ သိေုလှာင်မနှုငှက့် နြု ကမ်းများအခြေအနေလိကုလ်ံ
ကုန်ကြမ်းများ ထပ်မံဆုံးရှုံး မှုများအဖြစ်ပေါ်စေရန်ဖြေရှင်းရမည်၊ ထို့ကြောင့် အကျိုး
ရလဒ်များအစီရင်ခံမှုနှင့်အကဲဖြတ်မှုအမျိုးမျိုးသည် တိကျ သောလုပ်ငန်းအောင်
ပုံမှန်အချိန်မီရှိနေရ မည်၊ အဆင်ပြေချောစေရန်နှင့် စနစ်တကျစနစ်ဖြစ်စေရန်လုပ်ငန်း
မြင်မှုရရှိရန်နှင့် ပြဿနာများကို ထိရောက်စွာဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အမှန်တရားနှင့်နီး
စဉ်အဆင့်ဆင့်များ စစ်ဆေးမှုအား ထောက် ပံ့မှုပေးသောပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်၊
စပ်သော ကိန်းဂဏန်း သို့မဟုတ်တန်ဖိုးရှိရမည်။
ဥပမာ- အစားအစာထု တ် လု ပ် ရ န်နှ င့် အ သွ င်ပြောင်း လဲ ရ န် တွ င် အသုံးပြုသော ERP ပရိဂုရမ်သည် ကုနြု ကမ်းများ၏သက်တမ်းကာလဆိငုရ်ာစီမခံန်ခ့ွဲမကှုအို လေးထားသည်။ အစားအစာများ၏ သက်တမ်းကာလဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုသည် ဆုံးရှုံးမှုများကာကွယ် တားဆီး ရန် အ တွ က် အကယ် ၍ စစ်ေ ဆးသောစနစ် သို့  မ ဟု တ် ERP စနစ် ရှိ လျှ င် ကုနြ် ကမ်းများ၏သက်တမ်းကာလ၏ အကြောင်းရင်း ကိစုစ်ဆေးရန်စနစ်ချထားနိငုသ်ည်၊
အစားအစာထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အဆိုပါပရိုဂရမ်ကုအိသုးံ ပြုလျှင်ထုတ်ကုန်
From the info on page 36, it showed that the most spending cost
စစ်ဆေးမှုနငှစ့် မီခံန်ခ့  မွဲ တှုတ့ို ငွထ်ိရောက်မှုဖြည်ဆ့ည်းစေသည်၊လုပုင်န်းစဉ်အတောအ
came from the material, while labor cost was the least spending element.
တွင်းမလိအုပ်သောဖြစ်ပေါ်နိငုမ်ည်ဆုံ့းရှုံးမှုများကိတုားဆီးရန်ကနုက်ျစရိတမ်ျားလျှော့
Thus, the most effective expenditure managing in the process should be
involved with material and maintenance & miscellaneous costs.
For food related business operation, even though the cost will continue
For resource and maintenance procedure management with the most
to increase from time to time, to make more profit by increasing the
effective result, it requires monitoring the report and indicating continuous
product price is definitely notagood idea in the long run. If we take good
and take action immediately which this part of operation can use programs
consideration on this issue, we will find that the effective solution is to
to effectively supplement work performance as the replacement to human
solve internal expenditure problem. This way will help compensating the
labor. These managements can be divided into6elements as follows,
profit loss. Good problem solving and directly getting to the point in food
1. Material’s Expiration Date Management
processing and manufacturing will lead to profit earning in the long run
Using material or product that closer to its life span is the foundation
which factors to cause problem in food manufacturing are consider very
in the basic material management, careful monitoring and inventory
sensitive. Those may include the problem from pets, bacteria or life span
check-up which will significantly help reducing the waste of materials.
of material itself. This article is aimed to emphasize data collection
One of the best ways to count expiration date window is to start counting
procedure and food’s life span management, or may call to count on of
since the date receiving materials in warehouse or checking material back
Lean principle as the supplementary to the procedure by using incurred
to manufacturing process in order to definitely estimate material’s life
expenditure data divided into3big groups as follows
2. Food Retailing’s Life Span Management Managing the life span of retailed products will reduce product return and the use of credit. These factors will depend on the product demand of each customer which will have varied conditions based on each product. In addition, rearranging inventory will use First – Expire – First – Out (FEFO) principle or selling products closer to their expiration date first which it is necessary to focus on monitoring expiration date of each ingredient of the certain food in order to evaluate the average expiration date. And if it is combined with good management, it will not only effectively manage product selling space, but also continue to sell the same products in longer period of time. 3. Recipe and Food Ingredient Management Effectively manage recipe and food ingredient can significantly help reducing incurred cost of material selection under the condition that can make some reasonable adjustments such as adjusting the selection of quality materials or ingredients as the replacement. This element is considered to rather emphasize on preventive strategy which will focus on eliminating the chance to initiate the wastes prior the production by using or processing products that are about to reach their life span first. 4. Manufacturing and Result Report Process Effectively managing manufacturing process is always about estimation and prediction on the incurred result as well as expenditure in order to initiate work procedure development and expenditure control. In case the estimated result drastically mismatching with estimated value, it requires analyzing and finding problem, indicating the cause and solution as well as perform revision before more material wastes are occurred. Thus, result report and evaluation must provide values or numbers that is much closer to the reality in order to initiate precision and effective problem solving. 5. Maintenance & Repair Task Management Maintenance & repair plan management is considered one of the keys in manufacturing process and food processing. If any damage is occurred or maintenance beyond designated period derives the waste of manufacturing process caused by the accident, it will extend material’s time and cause delayed transportation which eventually affects business partner and shorten the product’s life span.
Food’s life span checking management can setup the system to check material’s life span in order to prevent the waste. If entrepreneur brings
6. Bringing in Technologies to Support the Process
checking system or ERP into food manufacturing process, it will enhance
Collecting data and monitoring the status of materials in all processes
checking performance and effectively manage products to increase incurred
require systematic operation and updated data which can use program
profit by reducing cost from unnecessary waste that may be occurred during
developed to support the process check-up for more convenience and
orderliness such as ERP program used for manufacturing process and food processing by mainly focusing on material’s life span management.
စက် မှုလုပ်င န်းစက် ရုံ အ တွ င်း လျှပ် စ စ် မီး ၏ ဆွ စ်( ချ)ဂီ ယာ(Switchgear) ခလု တ်ခုံ Check List for Switchgear Cabinet in Industrial Plant
စက်မှုလုပ်ငန်းစက်ရုအံတွင်း လျှပ်စစ်မီး ၏ ဆွစ်(ချ)ဂီယာ(Switchgear) ဘောက်(MV&LV Switchgear) သည် အဓိကလျှပ်စစ် ပစ္စည်း ကိရယိာအတွင်း လျှပ်စစ်ပေ့ို ဆာင်ပေးရာတွငအ်ရေးပါသော ပစ္စည်း ကိရယိာဖြစ်သည်၊ ထိေ့ု ကြာင့် လုပုင်န်း ဆောင်ရကွသ်၏ူအမြင်ဆ့ုးံ ဘေးကင်းမှုအတွက် နှင့် စွမ်း ဆောင်မအှုရည် အသွေး ထိရောက်မရှုှေိ စရေးအတွက် အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်နငှပ့် မုံ နြှ် ပုပြင်ထနိ်း သိမ်း မှုရှိ ရမည်၊ စစ်ဆေးမှု နှငြ့် ပုပြင်ထနိ်း သိမ်း မှုသည်အောက်ပါအ ချက်အလက်များကိထုည်သ့ငွ်း စဉ်းစားရမည်။
လေထုတုကို စ်ားမှု Atmosphere Corrosion
MV & LV Switchgear ထိန်း သိမ်း ပြုပြင်မှု တွငထ်ည်သ့ငွ်း စဉ်း စားရမည်အ့ချက်များ
အညစ်အကြေးများနှငဖ့် နုမ်နှုမ့်ျား Dirt and Dust
ပတ်ပတ်လည်အပူချိနန်ငှစ့် ထို ငိုး ဆ Surrounding Temperature and Humidity
Factors to Take into Account in MV & LV Switchgear Maintenance
အလုပုလ်ပြု ကိမန်နှုး Operating Frequency
(Interrupting Capacity) ဖြစ်သောကြိမန်နှုး Frequency in Short Circuit Current Cut Down
စစ်ဆေးရန်နည်းလမ်းမှာ မူမမှနမ်မျှုားကိသုာမာန်မျက်စြိ ဖင်သ့တိပြုနည်းနှငစ့် မ်းသပ်တငိုး တာကိရယိာဖြင့် နှစမ်ျိုးစလံုး အသံုး ပြုနိငုသ်ည်၊ ဇယားထဲသမ့ိုတှတ်မ်းထားပြီးကောက်ချက်ချကာပြုပြင်ထနိ်း သိမ်း မှု လုပုင်န်း အဖြစ် ဦးဆောင်လမ်းပြရန်ဖြစ်သည်။
သာမာန်မျက်စြိ ဖင်စ့စ်ဆေးခြင်း • တပ်ဆင်မအှုခြေအနေ • ခလုတခ်အုံ တွင်း ကိရယိာအခြေအနေ • အခြားသော
ဆွစ(် ချ)တိန်း ချုပ်မကှုစို မ်းသပ်
Inspection by Sight • Installation Condition • Device Condition Inside the Cabinet • Etc.
စစ်ဆေးခြင်း Switch Board Inspection and Test
တိငုး တာကိရယိာဖြင်စ့စ်ဆေးခြင်း • လျှပ်ကာခုခုမံတှုငိုး တာခြင်း • အပူ၊ CB Contact Resistance Test တိငုး တာခြင်း • အခြားသော Inspection with Measuring Device • Measure Insulation Resistance • Measure Thermal CB Contact Resistance Test • Etc. october - december 2016
မပတ်သက်သောများအရာရှိမရှိ၊ သို့မဟုတ် လောင်စာဖြစ် မဖြစ်၊ သို့မဟုတ် အခြခံအုတ်မြစ်တိမ်းစောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြိုကျ ခြင်းရှိမရှိ၊ အခန်းထဲတပ်ဆင်လျှင် လေဝင်လေထွက် ကောင်း မကောင်းစသည်တို့စစ်ဆေးခြင်း။
လေထွက်ပေါက်များစစ်ဆေးခြင်း၊ခလုတ်ခုံအတွင်းလေဝင် လေထွက် ပုံမှန်မှုရှိမရှိ၊သို့မဟုတ်ဖိအားထွက်ပေါက်ပိတ်ဆို့ မှုရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်း၊ ခလုတ်ခုံ၏အတွင်းနှင့်အပြင် အခြေအနေများစစ်ဆေးခြင်း၊ အဖုံးနှင့်သော့၊အသံ၊အငွေ့၊အရသာ၊တုန်ခါမှု၊စိုစွတ်မှု၊သန့် ရှင်းမှု၊သံ ချေး၊ဖုန်၊ပင့်ကူအိမ်နှင့်အခြားသောအရာများစစ် ဆေးခြင်း၊ အဆောက်အဦအပြင်ရှိခလုတ်ခုံများအတွက် အမိုး၊နံရံ၊မိုးကာများသံ ချေးရှိမရှိတို့ကိုစစ်ဆေးခြင်း။
ကြိုးချိတ်ဆက်နေရာအားလုံး၊ အပူလွန်ကဲမှု၊ ပြုတ်ကျမှု၊ လျှော့ချမှုရှိမရှိတို့ကိုစစ်ဆေးပြီးတင်းကြပ်စေခြင်း(မီးပံ့ပိုးပို့ ဆောင်ပေး နေစဉ်အပူချိန်စစ်ဆေးခြင်း)
ကေဘယ်လ်ခေါင်း (Cable Terminator)
Corona ဖြစ်သောသဲလွန်စ၊ တိပ်ဖြည်မှုသဲလွန်စ၊ သန့်ရှင်း မှု၊ အက်ကြောင်း၊မြေအောက်ကြိုးအကာစသည်တို့စစ် ဆေးခြင်း။
ဆုပ်ကိုင်မှု၊အပူချိန်တိူင်းတာမှု၊ဘတ်စ်ဘားကြိုးနှင့် ကိရိယာ များဆက်သွယ်မှု၊
ဘတ်စ်ဘားလျှပ်ကာ (Bus Bar Insulators)
သန့်ရှင်း မှု၊အခြေအနေ၊ပြုတ်ကျမှု၊လျှော့ချမှု၊ပျက်စီးရာ၊ အရောင်ပြောင်းလဲမှု၊အက်ကွဲကြောင်းများစစ်ဆေးပြီးသန့် ရှင်းစေခြင်း။
လျှပ်ကာခုခံမှုနှင့် Power Factor
သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးနောက်၊လျှပ်ကာခုခံမှုနှင့် Power Factor ကိုသတ်မှတ်ချက်နည်းလမ်း အတိုင်းတိုင်းတာခြင်း။
မြေအောက်ကြိုး Grounding နှင့် လျှပ်ကူး
မြေအောက်ဆက်နေရာနှင့်အဓိကမြေလွှာ အခြေအနေ၊ အဖုံး၏လျှပ်ကူး ပစ္စည်းများချိတ်ဆက်မှု၊ မြေကြီးအောက်ဆင်းခြင်းခံနိုင်မှု
ပစ္စည်းများ Bonding ချိတ်ဆက်မှု
မီးသီး (Indicator Lamp)
Draw Out စုံ
Draw Out အမျိုးအစား ဆားကစ်ဘရိတ်ကာ ကို ဆွဲချပြီး၊ မျက်နှာပြင်ထိတွေ့မှုနှင့်သန့်ရှင်းမှု၊ Draw Out မျက်နှာပြင် ကျင်လည် မှုရှိမရှိတို့ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ စက်ဆီထည့်ပြီး၊ပစ္စည်း ကိရိယာများ၏ယန္တရားလည်ပတ်မှုများ စစ်ဆေးခြင်း၊
Mimic Diagram စစ်ဆေးမှု
စက်ကိရိယာတိုင်း၏ဆိုင်းဘုတ်မှန်ကန်မှုကိုစစ်ဆေးပြီး၊မှန်ကန်မှုမရှိလျှင် စစ်ဆေးရေး အစီရင်ခံစာထဲတွင်ဖေါ်ထုတ် ပေးထားခြင်း၊ Mimic Diagram နှင့်ကြိုးချိန်ဆက်ရေးမှန်ကန်မှုကိုစစ်ဆေး ခြင်း၊ မှန်ကန်မှုမရှိလျှင် စစ်ဆေးရေး အစီရင်ခံစာထဲတွင် ဖေါ်ထုတ်ပေးထားခြင်း၊ ခလုတ်ခုံကိုစစ်ဆေးပြီးသန်ပရှင်းရေးထပ်မံပြုလုပ်ခြင်း၊
Check whether there is unrelated part or leftover fuel or not. Check the base if it is leaned or Condition of Placement
subsided. In case it is placed inside the room, it is necessary to check whether air ventilation is working well or not.
Open Space for Operation
Open space surrounding and entrance have no obstruction.
Air Ventilation Inside the Cabinet and Pressure Ventilat-
Check air ventilating holes to see whether air ventilation inside the cabinet is normal or not
and check pressure ventilating holes whether it is working well or not. Check cabinet condition including outside and inside the cabinet, cabinet cover and key.
Structure and General Condition of the Cabinet
Check the sound, smoke, odor, vibration, humidity, cleanliness, rust, dirt, spider web and etc. For cabinet installed outside the building, check the condition of the roof and wall if they are still shelter the rain very well and have no rust.
Line Connection Pole and Line Connection Point
Check all line connection points whether there is some sign of being loosen and high thermal or not, then tighten them up once again (measure temperature during electricity feeding) The traces of corona occurrence, trace of loosen tape, cleanliness, crack and shield grounding.
Check the conditions of electrical line and electrical lining device.
Gripping, measure thermal, check the connection between bus bar and device.
Insulator to Support Bus Bar
Check the dirtiness, trace of being loosen, deterioration, color change, crack & dent as well as clean it up.
Crack and line connection
Electrical Insulation and Power Factor
After cleaning, check insulation values and power factor following designated procedure. Condition of grounding point at the cabinet and main ground. Bonding of cabinet cover.
Measure grounding resistance value and check the condition of ground connection and bonding line and tighten up the connection points once again.
Check operation and operation control system
Check common condition, deterioration and operation.
Check if it is still working with no loosen and broken lamp.
Check condition and operation Pull out the circuit breaker (Draw Out type) to check contact surface and clean up Draw Out
Draw Out Set
surface whether it is flexible or not. Apply lubrication and check mechanism and operation of devices.
Circuit Breaker Operation Test Check Machine Label
Check Mimic Diagram Clean Up
Check the operation of Interlock system and test the system following the designated procedure. Check electrical operation and interlock system once again. Check whether the machine label is matched with what being indicated in electricity design or not. If it is mismatched, inspector must indicate it in inspection report. Check whether line connection circuit is matched with Mimic Diagram or not. If not match, inspector must indicate the mismatch on inspection report. Check cabinet and clean it up once again
Source: Mr. Leuchai Thongnil, Metropolitan Electricity Authority (MEA) President of Electrical Engineering Board of the Council of Engineers
INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT PRODUCT SHOWCASE ကုန်ပစ္စည်း ဟန်ပြခြင်း အီနှင့် စက်အစိတ်အပိုင်းများတို့၏
While every effort has been made to ensure that the information contained herein is comprehensive and accurate, the publisher will not accept any liability for omissions or errors. Should there be any inaccuracies, please write to our marketing department: info@greenworldmedia.co.th. ဤအချက်အလက်အားလုံးသည် ပြည့်စုံနှင့် မှ န်ကန်တိကျသောအချက်အလက်ရပ်ှိ သည်။ ဟု ကျွန်တော်သည် မျှော်လင့်ထားပါသည်။ ဤအချက်အလက်မှားယင်းချကါ (သို့မဟုတ်) ထိန်းချန်ခြင်းများရှရင်ိသင်သည် အမှားအယင်းများတို့ကို ကြားပြောနိုင်ပါမည်။ ကျွ န်တော်တို့၏ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးဦးစီးဌာန၏အီးေ မးလ် ဆက်သွယ်နုင်ိပါသည်။ အီးမေးလ်။ info@greenworldmedia.co.th.
Whether food industry, biotechnology, or automotive industry, whether gigantic manufacturing plant or small consumer product, whether measuring, controlling, or regulating: Our products and system solutions can be found wherever fluids and gases are used. They are highly efficient-in two different respects. Our products and system solutions significantly contribute to an efficient overall process. At the same time, they are not just tailored to their respective application, but can quickly and efficiently be adapted as system solutions for other industries, products, and purposes as well. As one of the few providers on the market, we cover the entire process involved in working with fluid media: measuring, controlling, and regulating. To most of our customers, we are far more than justaprovider of excellent products (although currently our product range spans more than 28,500 different products). Our customers also value us asatrusted consultant and experienced system solution provider.
ENTERPRISE APPLICATIONS •
Product Lifecycle Management (PLM) – CAD, CAM, CAE, PDM, Digital Manufacturing Mobility & Barcode l Board Room Solutions (Meeting Productivity) l eCommerce l Databases Corporate Performance Management l Supply Chain Optimization & Execution l eProcurement& Sourcing On-Premise & Cloud – ERP, CRM, Hospital Information System, Collaboration Solutions
DATA CENTER & NETWORK SERVICES • • • • • •
Business Continuity / RaaS DC Hosting Managed Services DC Consultancy (Design & Build) IT Outsourcing Services Network Security / SOC
Systems & Storage Virtualization Data Management / Storage High Availability / DR Infra / Data / Cloud Security Wireless Network Infra
(66) 2721 1801-8
(66) 2693 2090-4
(66) 2721 2657
(66) 2693 2095
IKO Thompson Asia Co., Ltd. The website containsavast range of products listed by model number that allows users to verify product information.
CAD data for products and Catalog PDF files are available for download. You can also view the worldwide trade show/exhibition schedule and much more.
I.N.B. Enterprise Co., Ltd. The LM Guide (Linear Motion Guide)
IKO Product information Products can be searched by product series names and byabearing’s directional motion. On each page, product features are detailed inauser friendly format Download <CAD Data> CAD data can be downloaded for each product. 2D and 3D CAD data is provided. The LM Guide Actuator
<Product Catalog> The product catalogs can be downloaded in PDF format. Login Screen
Introducing the Technical Service Site The Technical Service Site can be accessed from the website. We offer various tools to help you make an appropriate Linear Way and Linear Roller Way selection. Please use them to aid with your selection. You can also use the site to download Instruction Manuals for the mechatro series.
The website containsavast range of products listed by model number that allows users to verify product information. CAD data for products and Catalog PDF files are available for download. You can also view the worldwide trade show/exhibition schedule and much more.
Exhibition/trade show information
Worldwide trade show/exhibition schedules are available so you can find out where will be showcasing our products near you. We encourage you to come view our products in person at any of our booths.
I.N.B. Enterprise Co., Ltd. We are an authorized distributor of THK products in Thailand. "THK" stands for " Toughness," “High Quality," and " Know-how." Combining THK's creative ideas and unique technology with INB’s strong distribution channel made the company nationwide pioneer in the introduction of the Linear Motion (LM) Guide mechanism and we has also developed many other unique mechanical components, including the Ball Spline, Ball Screws and Link Balls.
This is our main product, incorporatingapart withalinear rolling motion into practical usage for the first time in the world. It realizes the development of high-precision, high-rigidity, and energy-saving, high-speed machines with long service lives.
The LM Guide Actuator
This isacompact actuator with high rigidity and high precision that has an integrated LM Guide withaball screw. Reductions in the number of parts and design man-hours can be realized by adopting the LM Guide Actuator.
(66) 2637 5115
(66) 2613 9166-71
(66) 2637 5116
(66) 2215 8494
3rd Fl, Zuellig House, 1-7 Silom Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500, Thailand
J.Sri Rung Rueng Impex Co., Ltd.
IMADA ‘MX2 series’
Motorizes Vertical Test Stand with speed control, Timer & Cycle Counter. • •
Ultra rigid, .5 mm deflection at maximum load Manual, Increment, Single Cycle, Continuous Cycle and Force Control selectable • Easy to use program dial and menu screens control mode, speed, timer and cycles • Programmable timer up to 99’ 59.9 sec in 0.1 sec increments • One stand for both compression (push) and tension (pull) tests • Wind speed range: 0.4 -11.8 in/min (optional speed ranges available) • Optional digital distance meter available • Conditional Overload Prevention • Max clearance 9” (with extender 14”) *Able to do various kinds of test such as compression, tensile, peeling and so on.
Parker Hannifin is the world’s leading diversified manufacturer of motion and control technologies and systems, providing precision engineered solutions forawide variety of commercial, mobile, industrial, oil & gas, automotive, food, beverage and packaging markets. • • • • • •
Automation (Pneumatics Cylinder & Actuators, Air preparation, Valves, AC Drives, DC Drives, Legris) Connectors (Hoses & Fittings, Quick Couplers, Polyflex) Hydraulics (Cylinders, Pumps, Valves, Motor, Accumulator) Filtrations ( Process Filtration, Compressed Air & Gas, Gas Generator, Hydraulic Filter, Water Purification) Instrumentation (Valves, Fittings, Regulator, Flow Control, Analytical Systems, Refrigeration & Air-conditioning) Engineered Materials (Seal)
(66) 2327 0351-5
(66) 2186 7000
(66) 2327 0356-7
(66) 2374 1645
Parker Hannifin (Thailand) Co., Ltd
TungForce-Rec,anew miniature shoulder
milling series, featuresaunique clamping system offering exceptional stability in machining small pockets and slots. • • • • • • •
Reliability for stable machining. Optimized insert positioning provides core strength to the cutter body in small diameters. Obtuse-angled flank surface of the insert toughens cutting edge, avoiding chipping. Insert strength is increased at the cross section across the screw hole. Large screw and its increased contact area with the body improve stability. V-shaped insert bottom broadens clamping area for the given size of the insert. Sharp cutting edge with positive rake face ensures smooth cutting.
GEMU – Your Valve Partner Application
Small amount of dye concentrate per minute must be continuously introduced into the process for colouring cotton (denim), e.g. for jeans. As potential pressure fluctuations and other variables haveanegative effect on the amount to be controlled, this small amount could not be fed into the system directly fromasupply tank withametering pump. A controlled system had to be established. This consists ofaprocess controller,avolumetric flowmeter andacontrol valve.
A GEMÜ 568 is used asacontrol valve withavalve body made from stainless steel 316L. The valve hasacontrol cone with linear characteristics. This means that the controlled volume flow is in direct proportion to the signal (avariable4- 20 mA).
(66) 2751 5711
(66) 2751 5715
Interlink Tower 4th Fl. 1858/5-7 Bangna-Trad Road km.5 Bangna, Bangna, Bangkok 10260 Thailand
Adekom Kompressoren (Thailand) Co., Ltd.
Freelance isafull-fledged distributed control system that combines the advantages of both worlds – DCS and PLC. It offers the small footprint ofaPLC, together with the full functionality ofaDCS. The integrated environment simplifies engineering, commissioning, maintenance and fieldbus management. The intuitive operator interface enables easy operation and diagnosis of the entire system.
+95 1 384541 (direct line)
Adekom Kompressoren (Thailand) Co., Ltd. is the Thailand’s leader in Compressed air engineering for all kinds of applications. Our products : Screw air compressors and compressed air treatment system, advance bio gas compressor. With our best research and development , Adekom is able to serves industrial market with superior systems in order to provide TOTAL AIR SOLUTION to whatever air demand.
Unit 6A, 6th Floor, Centre Point Towers, No.65, Corner of Sule Pagoda Road and Merchant Street, Kyauktada Township, Yangon Myanmar
Band saw Model H-300AUTO
Numerical control panel, parameter. Auto-control control panel, digital setting, parameter setting, display of operation indication and equipment state. Hydraulic control of the feeding speed of sawing/cutting, stepless adjustment. Hydraulic control of pencers clamping, automatic feeding. Uses grating ruler control. PLC sets the whole sawing/cutting process. The saw blade uses untifriction bearing and hard alloy for guiding
(66) 2453 2374-5
(66) 2453 2349
INDUCTION MOTOR "CROMPTON" • • • •
IP55 dust and spray proof 155 Degree Celsius heat resistable Insulation Class F Case made of aluminuim and cast iron Voltate can be wired with either high voltage or low voltage electric wiring systems alternatively. Cavities at frontage and rear for lubricating with grease and ventilating lubricant on bearing are provided. Magnitude : from 0.25HP to 1500HP, either stand or flange type.
(66) 2988 2334-6
(66) 2988 2337
(66) 2281 5331
(66) 2280 8033-5
Comau (Thailand) Co., Ltd.
COMAU Racer3is the light and small form factor 6-axis robot which is fastest in its class with new material technology that makes it light but stable at high speed. Compact controller “R1C” is in size of 19 inches industrial rack which can be integrated inside the machine or table top. The “openROBOTICS” concept is also applied to this robot arm by using external controller from B&R to control the robot together with other components in your process without having complicated bus communication.
Utilizing for Steam, Compressed Air, Liquid Suitable for pressure reducing at main drain and pressure reducing station Maximum used pressure: 25 bar (steam), 31 bar (air) Size: 1/2" to 2", DN15 to DN 50 For PRV47(steel), DN65 áÅÐ DN80 , PN25 are available Joint: Screw/ Flange Choose valve size regarding to the required flow rate rather than the drain size
(66) 2231 8137
(66) 2231 8121
(66) 2322 1678-87
IRC Technologies Ltd. is the solution provider specializing in Electrical & Electronic Test & Measurement of Keysight products. We are Keysight’s authorized distributor in Thailand withahistory of 20 years services under HP and Agilent legacy. We intend to provide high quality of services, repairing, ISO 17025 calibration laboratories standard with an in-depth on technical sales and full engineering team to help customer selected right solution as to fit the requirements.
66) 2720 5155
Handal Screw Compressor comes with superior design and functions that are specialized for the area with unstable electricity. With Phase/Unbalance protection, the machine will automatically be unloaded when electrical instability is detected and will finally shut down the system completely if the stability is considered as serious. The machine is also designed to prevent the reverse rotating of the screw when there is an electric shock, which possibly leads to severe compressor problem. It comes with Host/ Fan Rate Current to help protecting main motor from being overloaded. With this, it’s guaranteed that the machine will be suitable even in the electrical instability area.
(66) 2717 1400
(66) 2717 1422
(66) 159 9861-4
(66) 2159 9860
Features : • •
3 Phase wire measuring meter V(line), V(Phase), A(Phase), kW, kVA, kVar, kWh, kVAh, PF, Hz, kW Clearly vision with LCD Display Accuracy +/- 1% FS Progeammable multiplier of CT & PT ratio. Standard size with 96x96x80 mm. (DIN ?) 4-20 mA and pluse output provide. Panel mounting. Interface with computer by RS-485, Modbus Protocol. (66) 2693 7005
The Mach3 Series : Special Features
Dynamic Waterjet increases speed and reduces taper Mach3Ball Screw DriveThree-sided load capability; with four-sided operator access Uniquely designed which minimizes footprint by integrating pump into the backside of the machine frame, allowing all facets of machine to be controlled by rollaround control. Variety of pump selections from the 60K psi Direct Drive up to Flow's exclusive HyperPressure pumps, rated up to 94K psi.
(66) 2277 3565
(66) 2874 1559, (66) 2428 4338
(66) 2428 4339
High Feed end Mills Boost your productivity “EUMACH” the high speed machining center model HSM-600 • • • • • • •
High quality meehanite castings without deformation High quality spindle design with super low vibration. High spindle speed, up to 38,000 RPM High rapid feedrate X/Y/Z = 30/30/24 M/Min Movement X/Y/Z = 600/430/460 mm Table size = 850 x 400 mm ATC Swing arm type 20 Tools
Ideal for 3D pocketing and plunge milling For roughing molds and dies
Improved wear resistance and toughness Excellent torque resistance and tenacity
Incurved shape allows efficient milling2straight flutes
Excellent adhesion to the substract Hight temperature resistance
(66) 2947 9801-3
(66) 2947 9804
(66) 2736 2385
DIRECTORY OF INDUSTRIAL MACHINERY & EQUIPMENT အီနှင့် စက်အစိတ်အပိုင်းများတို့၏ဒိုင်ရိတ်တောရီ
FLOW & FLUD POWER COMPONENTS:
HAND TOOLS, POWER TOOLS & ACCESSORIES, INSTRUMENT
ELECTRICAL & ELECTRONICS PRODUCTS:
Air Compressors, Air Ducts, Couplings, Gaskets & Seals, Hydraulic Equipment, Pipes (Plastic / Rubber / Stainless / Steel), Pneumatic Equipment, Pumps, Valves
၄။ လက်နက်၊ အာဏာကိရိယာနှင့် တွဲဖက်ပစ္စည်း
၃။ စီးခြင်းနှင့် ဖလပ်မှုန့်၏အစိတ်အပိုင်းများ လေဖိသိပ်စက်များ၊ လေပိုက်လုံးများ၊ ကြားဆ က်ပစ္စည်းများ၊ ဂတ်စကတ်နှင့် ပင်လယ်ဖျံများ၊
Conduit & Raceway Systems, Control & Automation, Electric Wires & Cables, Electrical Equipment, Electrical Motors, Electrical Safety System, Electronic Equipment, Generators, Switch Boards & Controllers, Transformers, Uninterrupted Power Supply (UPS) ၆။ အီလက်ထရွနန်စ်နငှလ့်ျှ ပ်စစ်ထတုက်နုမ်ျား
ဟိုင်ဒရိုလစ်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ ပြွန်များ (ပလတ်
စတစ်၊ ခဲဖျက်၊ စတ သံမဏီ)၊ ၊ စုပ်စက်များ၊
မြာင်းစနစ်၊ အလိုအလျောက်ပိုင်ဆိုင်းခြင်း (နှင့်) ၊
လျှပ်စစ်နန်းကြီး (နှင့်) လျှပ်စစ်ကြေးနန်း၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ လျှပ်စစ်မော်တာ စက်များ၊ လျှပ်စစ်၏လုံခြုံမှုစနစ်၊ အီလက် ထရွန်နစ်ပစ္စည်းကိရိယာ၊ မီးအားပေးစက်များ၊ ခလုတ်ဘုတ့်ပား (နှင့်) ခလုတ်ပိုင်ဆိုင်းစက်နှင့် မပြတ်မတောက်ပေးသွင်းခြင်း (UPS) တို့စသ ည်ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
APPLICATION, SOFTWARE & SOLUTION PROVIDERS
FACTORY MANAGEMENT, OTHER PRODUCTS & SERVICES:
၇။ ညွှန်ကြားချက်အစု၊ ကွန်ပျူတာ၏ပရိုဂရမ်နှင့် ရှာဖွေကျွေးမွေးသ
Chemical, Material Handling, Metrology, Warehousing, Waste Management ၈။ စက်ရစုံ မီအံပုခ်ျုပ်မ၊ှု အခြားထုတက်နုန်ငှ့် ဝန်တောင်မမျှုား ဓာတုပစ္စည်း၊ ပစ္စည်းစီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ မြေအောက် မီးရထားနည်းပညာ၊ ကုန်လှောင်ရုံစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဖြုန်းတီးမှုစီမံအုပ်ချုပ်မှုတို့သသည်ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။
While every effort has been made to ensure that the information contained herein is comprehensive and accurate, the publisher will not accept any liability for omissions or errors. Should there be any inaccuracies, please write to our marketing department: info@ greenworldmedia.co.th. ဤအချက်အလက်အားလံုး သည် ပြည်စ့နုံ ငှ့် မှနက်န်တကျိေ သာအချက်အလက်ရပ်ှိ သည်။ ဟု ကျွန်တော်သည် မျှော်လ င်ထ့ားပါသည်။ ဤအချက်အလက်မှားယင်းချကါ (သိမ့ု ဟုတ)် ထိန်းချန်ခြင်းများရှရင်ိသင်သည် အမှားအယင်းများတို့ကို ကြားပြောနိုင်ပါမည်။ ကျွန်တော်တို့၏ဈေးကွက်ရှာဖွေရေး ဦးစီးဌာန၏အီးမေးလ် ဆက်သွယ်နုင်ိပါသည်။ အီးမေးလ်။ info@greenworldmedia.co.th.
BOONSUNGNOEN CO., LTD.
EATON ELECTRIC (THAILAND) CO., LTD.
55/29 Moo 3
89/1 Kasemsap Building, 4th flOOR
FLOW & FLUD POWER COMPONENTS
Jomphol Chatuchak Bangkok 10900 Thailand
Air Compressors, Air Ducts, Couplings, Gaskets & Seals, Hydraulic Equipment, Pipes (Plastic / Rubber / Stainless / Steel), Pneu-
Tel: (66) 2525 8630
Tel: (66) 2511 5300
115 Soi 62/1 Sukhumvit Road
555 Rasa Tower 2, 14th Floor
Unit 1401-1402 Phaholyothin Road
100 Moo4Soi Wat Saothongklang
Bangna-Trad Road (Km.23) Bangsaothong
Tel: (66) 2332 5555 (AUTO 22 LINES)
Tel: (66) 2937 1190
Bangsaothong Samutprakarn 10540 Thailand
Tel: (66) 2397 9200
29/10 Moo7Soi Poolchareon
71/296 Soi Ramkhamhaeng 164
133 Kanchanapisek Road SamAE-dam
Bangchalong Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand
Tel: (66) 2337 0360
Tel: (66) 2372 7302
Tel: (66) 2453 2374 to 5
164/1 Wisutkasat Road Bangpanthom
4th.fl. Boonyium&Associates Bldg.,
169/4, 169/5 Moo 1
Pranakorn Bangkok 10200 Thailand
1314-1322 Srinakarin Road
Tel: (66) 2281 5331, (66) 8 6973 7268
Tel: (66) 2322 1678 to 87
Pathumthani 12110 Thailand
matic Equipment, Pumps, Valves ABEX HYDRAULICS & ENGINEERING CO., LTD.
Email: info@abexhyd.com Website: www.abexhyd.com ADEKOM KOMPRESSOREN (THAILAND) CO., LTD.
Website: www.adekom-thailand.com AEROFLUID CO., LTD.
Tel: (66) 2577 2999, (66) 8 1359 9155 (66) 8 6055 0026 Email: info@aerofluid.com Website: www.aerofluid.com
Website: www.epmc.co.th CHICAGO PNEUMATIC COMPRESSORS 125 Wellgrow Industrial Estate Moo 9
Bangna-Trad Road (Km.36)
6 Ngamwongwan3Junction 5, Ngamwongwan Road
Bangwua Bangpakong Chachoengsao 24130 Thailand
Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000 Thailand
Tel: (66) 3856 2900
Tel: (66) 2952 6725 to 6
9 Soi On-Nuch 62
56 Moo2Soi Kanchanaphan, Bangplee-Tamru Road
44/16 Moo3Chimplee
Talingchan Bangkok 10170 Thailand
Tel: (66) 2448 8100
Tel: (66) 2136 2317
Suanluang Suanluang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2721 1801 Email: sales@alphac.co.th Website: www.alphac.co.th ALTER AIRCONDITIONING CO., LTD. 99/5 Moo 20 Lam Luk Ka Pathumthani 12150 Thailand
FLOWLUTION CO., LTD. 26/48 Moo4Suksavahd Road
Tel: (66) 2023 4172 to 4, (66) 8 1582 1818
89/76 RK Park Hathairath Road
Jomthong Bangkok 10150 Thailand
Bangcha Klongsamwa Bangkok 10510 Thailand
Tel: (66) 2877 3223
Tel: (66) 2171 5391
ATLAS COPCO (THAILAND) CO., LTD. 125 Wellgrow Industrial Estate Moo9Bangna-Trad (KM.36) Road
GLOBAL FLOW TECH CO., LTD. CPM ENGINEERING CENTER CO., LTD.
94/1 Moo 8
559/26 Moo7Bangplee-Yai
Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand
Tel: (66) 3856 2900, (66) 8 1826 0679
Tel: (66) 2325 0321 to 3
Tel: (66) 2676 2299
27 Soi Luan-JeUr-ARnusorn 2, Sukhumvit Road
490 Thetsaban Rangsan Nua Soi 10 Road Ladyao
Tel: (66) 2312 3995
Tel: (66) 2753 4212
Tel: (66) 2953 8840 to 8
BITWISE (THAILAND) CO., LTD. 25/12 Moo 20 Teparak (KM.12)
HARCUS RUBBER CO., LTD.
8 Soi Ladkrabang 38
555/119 On-Nut Road
88/153 Moo 10
Tel: (66) 2326 9924 to 49
Tel: (66) 2328 6674
Tel: (66) 2181 2317
HATYAI P.M. CONTROL LTD., PART.
220/9 Moo 12
69, 71-73 Bamrungrat Road
1035/83-85 Soi Pracharaj 33
Songkla 90110 Thailand
Tel: (66) 7455 4447 to 8
Tel: (66) 2225 7656 to 7, (66) 8 1875 4477
Tel: (66) 2910 8754
891 Rama3Road Bangpongpang Yannawa
16/1 Suwintawong Road
Tel: (66) 2284 1100, (66) 8 9921 4578
Tel: (66) 2675 8230
Tel: (66) 2989 4521 to 31
Tel: (66) 2674 0292 to 3
46-52 Chalermkhet3Road
Wat Thepsirin Pomprab-SUTRUPAI
Tel: (66) 2621 5761
Tel: (66) 2138 2962 to 5
HYDRAULIC & PNEUMATIC SOLUTIONS CO., LTD. 420/3 Sathupradit Road Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120 Thailand
KANIT ENGINEERING CO., LTD. 800/3-4 Asoke Dindaeng Road Dindaeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2642 8762 to4Website: www.kanitengineering.com
KC MAHANAKORN CO., LTD. 141, 143 Narathivasratchanakarin Road Chongnonsri Yannawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2678 2530 to 40 Email: info@kcbkk.com Website: www.kcbkk.com
MAGNA INTERNATIONAL CO., LTD. 58 Soi Bangwaak 37 Bangwaak Road Bangwaak Pasricharoen Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2865 2501 to 8 Email: admin@magna.co.th Website: www.magna.co.th
MAHATHON ELECTRIC CO., LTD. 59/9-10 Moo6Ekkachai Road Bangbon Bangbon Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2894 3447, (66) 8 1445 2766 Email: info@mahathon.co.th Website: www.mahathon.co.th
MB INDUSTRIAL AUTOMATION CO., LTD. 111 Soi Sukhumvit 62/1 Bangchak Prakanong Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2741 4681 to4 Email: monchai@mbinau.com Website: www.mbinau.com
Email: nobleeng@ksc.th.com Website: www.nobletec.co.th
SUVARNABHUMI PIPE INDUSTRY CO., LTD. 8 Soi Ladkrabang 38 Ladkrabang Ladkrabang
9 Sathorn Road Soi 13
Tel: (66) 2326 9946
Tel: (66) 2211 0053, (66) 8 6665 1451 Email: sales@orbit-hoseclips.com Website: www.orbit-hoseclips.com
P.V.S. TRADING ENGINEERING CO., LTD.
T.M.C. INDUSTRIAL PUBLIC CO., LTD. 125/10 Moo5Bansuan Muang Chonburi 20000 Thailand
130/39-40 Soi Ramindra 40 Yak 6
Tel: (66) 3827 1933
Tel: (66) 2944 6810 to7Email: pvssales@truemail.co.th
Website: www.pvsvalves.com PARKER HANNIFIN THAILAND CO., LTD.
T.N. METAL WORKS CO., LTD. 92/1 Moo7Petchkasem Road Omnoi Krathumban
1265 Rama9Road
Tel: (66) 2115 5000
Tel: (66) 2186 7000
TEXFOCUS CO., LTD. PREMIUM EQUIPMENT & ENGINEERING CO., LTD
6/5 Moo 5
46 BANGCHAN INDUSTRIAL ESTATE Moo 14 Serithai Road
Pathumthani 12160 Thailand
Tel: (66) 2919 8900
Tel: (66) 2593 2000 to 3
THAI POLLUTECH MACHINERY CO., LTD. 324/36 Bangna Residence Room 301-302, 310 Floor 3
Sanphawut Road Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2744 9002 Website: www.thaipollutech.com
HEXAGON METROLOGY (THAILAND) LTD.3Soi. Bangna-Trad 34 Bangna-Trad Road Bangna Bangna
HAND TOOLS, POWER TOOLS & ACCESSORIES, INSTRUMENT 3M THAILAND LTD.
Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2361 3695 Email: contact.th@hexagonmetrology.com Website: www.hexagonmetrology.com
159 Sermmit Tower 12fl.
HITACHI POWER TOOLS (THAILAND) CO., LTD.
399 Worachak Road
84, 88 Krungthepkreetha road
Klongtoei Nua Wattana
Tel: (66) 2260 8577, (66) 8 1818 1825
Tel: (66) 2379 4460 to 3, (66) 8 5447 0310
Tel: (66) 2223 1444
Email: sales@tirawatgroup.com Website: www.tirawatgroup.com
AMERICAN TOOL (THAILAND) CO., LTD.
26/4 Soi Chalermsook
IRC TECHNOLOGIES CO., LTD.
719 KPN Tower Rama9Road
Bangchan Industrial Estate Soi Serithai 85 Kan-
Tel: (66) 2939 0524 to 6
Tel: (66) 2717 1400
Tel: (66) 2906 3199
J. SRI RUNG RUENG IMPEX CO., LTD.
3775/6 Rama4Road
850/1 Soi Ladkrabang 30/5
22-22/2 Rama2Road
Tel: (66) 2712 0898
Tel: (66) 2451 1350 to 1
Tel: (66) 2327 0351 to 5
Email: info@toyoxthai.com Website: www.toyoxthai.com
U.P.E. ENGINEERING CO LTD.
Email: upe_engineering@yahoo.co.th Website: www.upeengineering.com
UNION TERM CO., LTD.
BLISS SERVICES (THAILAND) CO., LTD. 294/71-77
Email: salesjsr@jsr.co.th Website: www.jsr.co.th
Rom Klao Road Khlong Sam
45/7 Soi Chalermketh 2
173-173/1 Soi 27 Rama2ROAD
Tel: (66) 2184 9761
Tel: (66) 2621 9460 to 2
Tel: (66) 2870 0007 to 9
BOONSAN FASTENERS LTD.
UNITED AIR POWER CO., LTD.
1874, 1874/1-3 Moo3Soi Narai 2
K.S. UNION CO., LTD.
Wachirathumsathit 57 Sukhumvit 101/1 Road Bangchak Prakanong Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2746 3400
Theparak Mueang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2758 2204 Email: info@boonsanfasteners.com Website: www.boonsanfasteners.com
Suwinthawong Road Minburi Bangkok 10510 Thailand Tel: (66) 2543 6868 to9Email: marketing@ksunionbrush.com Website: www.ksunionbrush.com
162 Kanoksin Building Ramintra Km.4
Tel: (66) 2876 2727
Tel: (66) 2736 2122
Tel: (66) 2971 8000
356, 358, 360 Sirinthon Road
16 Soi Ekamai4Sukhumvit 63
2034/128 Ital-Thai Building
Tel: (66) 2881 0800 to 7
Tel: (66) 2369 2777
120 Soi Somdetprachaotaksin 44
92 Soi Phraholythin 32, Praholythin Road
850/8 Ladkrabang Road.
31st, 34th Floor, Unit 3103, 3403-3404, No 388
Tel: (66) 2941 6690 to 1, (66) 8 6478 5300
Tel: (66) 2326 6876 to 80
Tel: (66) 2697 0000
Website: www.schaeffler.co.th KUSUMA INTERTRADING CO., LTD. 161/33 Moo 1
SOON THAI JUN IMPORT LTD., PART.
88/3-90 Soi Pathumkongka Trimitr Road
Chonburi 20180 Thailand
Tel: (66) 3811 0789, (66) 3811 0793
Tel: (66) 2234 9555
20/55-56 MOO 6
Tel: (66) 2944 7858
Tel: (66) 2326 9946 to 49
612 Jarunsanitwong Road
Tel: (66) 2717 7199
Tel: (66) 2879 1127 to 9
Email: info@systronics.co.th Website: www.systronics.co.th
TECHNO KIKAI CO., LTD.
46/260 Soi Navamin 74 Navamin Road
Tel: (66) 2275 5630
P.S.M. BEARING CO., LTD. 88 Moo4Soi Chaiyaphruek 18 (Phitaktham) Chai-
Tel: (66) 2947 9801 to3Email: sales@technokikai.com Website: www.technokikai.com
yaphruek Road Talingchan
THK LM SYSTEM PTE LTD.
Bangna Tower, Tower A#1701, 2/3 Moo 4
Tel: (66) 2882 2888
Bangna-Trad K.m 6.5
800/43-45 Soi Trakul suk Asoke Dindaeng Road
Dindaeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2245 9113 Email: ecsales@pisanu.co.th Website: www.pisanu.co.th
Tel: (66) 2751 3001
TKK CORPORATION CO., LTD. 71 Soi Yenjit6Thungwaddon Sathon
PRIMUS CO., LTD. 119 Soi Srimuang Anusorn Sutthisarnvinijchai Road Dindaeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2693 7005
Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2211 7892 Email: sales@tkkcorporation.com Website: www.tkkcorporation.com
2/2 Soi Krungthep Kritha 8 (5) Krungthepkreetha road Huamark Bangkapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2379 3089 to 92 Email: contact@qtc-energy.com Website: www.qtc-energy.com
ELECTRICAL & ELECTRONICS PRODUCTS Conduit & Raceway Systems, Control & Automation, Electric Wires & Cables, Electrical Equipment, Electrical Motors, Electrical Safety System, Electronic Equipment, Generators, Switch Boards & Controllers, Transformers, Uninterrupted Power Supply (UPS) 3M THAILAND LTD. 159 Sermmit Tower 12fl. Asoke-Montri Road
261 Soi On-Nuch 17 yak 16, Sukhumvit 77 Road
Sukhumvit 71 Road Klongtan Nue Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2392 9913 to4Email: wuthi@veerasiamhardware.com Website: www.veerasiamhardware.com
Klongtoei Nua Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2260 8577, (66) 8 1818 1825 Website: www.3m.com/th
ABB LIMITED (MYANMAR BRANCH) Unit 6A, Floor 6, Centre Point Towers, No.65 Corner of Sule Pagoda Road and Merchant Street Kyauktada Township Yangon The Republic of the Union of Myanmar Tel: (95) 1384 541 Email: daw-nwe-nwe.oo@th.abb.com Website: www.abb.com.mm
ABEX HYDRAULICS & ENGINEERING CO., LTD. 100 Moo4Soi Wat Saothongklang Bangna-Trad Road (Km.23) Bangsaothong Bangsaothong Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2397 9200 Email: info@abexhyd.com Website: www.abexhyd.com
ABSOLUTE ENGINEERING CO., LTD. 666/26 soi pracharatbumpen 26/8 samsennork Huaykwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2690 5800 Email: absoluteengin@gmail.com Website: www.absolute-engineering.com
ADVANTECH CO., LTD. 65/205 Chamnanpenchart, 24 fl.OOR Rama9Road Huaykwang Huaykwang Bangkok 10320 Thailand Tel: (66) 2248 3140, (66) 8 6898 1177 Email: sales.th@advantech.com Website: www.advantech.co.th
164/1 Wisutkasat Road Bangpanthom Pranakorn Bangkok 10200 Thailand Tel: (66) 2281 5331, (66) 8 6973 7268 Email: Info@crm.co.th Website: www.crm.co.th
76 Soi Supapong3Yak 8
18th Floor, Ramaland Bldg., No.952 Rama IV Road
16 Soi Ekamai4Sukhumvit 63 Prakanongnua Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2105 0555 Email: info@compomax.co.th
Rangsit-Nakornnayok Road Lampakkud Thanyaburi Pathumthani 12110 Thailand Tel: (66) 2577 2999, (66) 8 1359 9155, (66) 8 6055 0026 Email: info@aerofluid.com Website: www.aerofluid.com
ALPHA ELECTRIC ENGINEERING CO., LTD. 33/101 Moo 10 Bangpla Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2752 5015 to7Email: alpha.electricengineering@gmail.com Website: www.alpha-electric.co.th
Nongbon Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2748 1993 Website: www.hipglobal.co.th
Tel: (66) 2632 9292, (66) 8 9793 1888 Website: www.hitachi.co.th
IBCON CO., LTD. 72, 74 Romklao Road
Minburi Minburi Bangkok 10510 Thailand Website: www.ibcon.com
899/50 Moo 21 Soi Chongsiri Parkland Bangpleeyai Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2313 3400 to 1 Email: sales@connexall.co.th
ASIADRIVE CO., LTD.
DRAEGER MEDICAL (THAILAND) CO., LTD.
63/57 Moo2Soi 81 Petchkasem Road
909 Ample Tower, 5th fl. Bangna-Trad Road Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2744 0110 Email: sales.thailand@draeger.com
APT GROUP CO., LTD. 2014/32-36 Moo4Theparak Muang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2757 8222
Nongkangplu Nongkham Bangkok 10160 Thailand Tel: (66) 2420 9590 Email: sale@asiadrive.net Website: www.asiadrive.net
ASIA-TECH POWER CONTROL CO., LTD. 54 Soi Wachirathamsatit 18 Sukhumvit 101/1 Road Bangna Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2399 5443, (66) 2747 9009 Email: yingroj@asiatech.co.th Website: www.asiatech.co.th
AVERA CO., LTD. 631 SCG Tower2nd fl. Nonsee Road
Tel: (66) 2361 6662 to4Email: sales@industrialxsupply.com Website: www.industrialxsupply.com
INTERFACECOM CO., LTD. 327 329 331 333 Karnchanapisak Road
Tel: (66) 2803 6855
Jomphol Chatuchak Bangkok 10900 Thailand Tel: (66) 2511 5300 Email: chalalaikwansuwan@eaton.com Website: www.eaton.co.th
3775/6 Rama4Road Phrakanong
56 Yada Bldg, 8 th FL No.802-803 Silom Road
Sriyawongse Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel: (66) 2652 5156 Email: info@eletto.co.th
89/1 Kasemsap Building, 4th fl.OOR, VibhavadiRangsit Road
Tel: (66) 2681 5050
50/3 Moo2Soi Udomsuk 53 Sukhumvit 103 Road
11 Soi Ruam Mit Phatthana Yaek6Watcharaphol Road Taraeng Bangkhen Bangkok 10220 Thailand Tel: (66) 2793 8787 Email: info@eda.co.th Website: www.eda.co.th
Tel: (66) 2917 3780
Bangkok 10160 Thailand Email: info@interfacecom.co.th Website: www.interfacecom.co.th
INTERROLL (THAILAND) CO., LTD. 700/685 Amatanakorn Industrial Estate Moo 1 Phanthong Phanthong Chonburi 20160 Thailand Tel: (66) 3831 6400 Email: th.sales@interroll.com Website: www.interroll.com
INVERTER SOLUTION CO., LTD. 87/511 Kanchanapisek Road Bangbon
Tel: (66) 2712 0898 Email: marketing@solimacgroup.com Website: www.solimacgroup.com
BITWISE (THAILAND) CO., LTD. 25/12 Moo 20 Teparak (KM.12) Bangpleeyai Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2312 3995 Email: info@bitwise.co.th Website: www.bitwise.co.th
BTT UNITED CO., LTD. 212/3 Soi Krungthep-Nonthaburi 37 Krungthep-Nonthaburi Road Wongsawang Bangsue Bangkok 10800 Thailand Tel: (66) 2586 8733, (66) 8 1777 8297 Email: info@bttunited.com Website: www.bttunited.com
Bangbon Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2899 6800 Email: sales@inverter-solution.com Website: www.inverter-solution.com
719, 4th Floor, KPN Tower Rama9Road Bangkapi
8 Soi Ladkrabang 38 Ladkrabang Ladkrabang Bangkok 10520 Thailand Tel: (66) 2326 9924 to 49 Email: contact@harcusrubber.com
Huay Kwang Bangkok 10310 Thailand
K & P F.A CENTER CO., LTD.
259/83 Soi Preedi Panomyong 13 (Phibulwej)
220/9 Moo 12 Tachang Bangklam Songkla 90110 Thailand Tel: (66) 7455 4447 to 8 Email: sale@hatyaipm.com Website: www.hatyaipm.com
Tel: (66) 2717 1400 Email: info@irct.co.th Website: www.irct.co.th
Sukhumvit 13 Road Phrakanong Nua Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2381 4681 to 93 Email: marketing@kpt-group.com Website: www.kpt-group.com
119 Soi Srimuang Anusorn
Chan Road Sathorn
Tel: (66) 2693 7005
KEYENCE (THAILAND) CO., LTD. 2034/128 Ital-Thai Building Bangkapi Huaykwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2369 2777 Email: info@keyence.co.th Website: www.keyence.co.th
LED SPECTRUM CO., LTD. 194 Moo6Saima Muang Nonthaburi 11000 Thailand Tel: (66) 2903 5575 Website: www.ledspectrumthai.com
M.T.K MARKETING CO., LTD. 20/55-56 MOO6Klongkum Buengkum Bangkok 10230 Thailand Tel: (66) 2944 7858 Email: mtk@mtkshop.net Website: www.mtkshop.com
MAX VALUE TECHNOLOGY CO., LTD. 261 Soi On-Nuch 17 yak 16 Sukhumvit 77 Road Suanluang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2717 7199 Email: sales@maxvalue.co.th Website: www.maxvalue.co.th
MOTOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
OA. SALES AND SERVICE CO., LTD. 89/2 Moo5Samaedum Bangkhunthien Bangkok 10150 Thailand Tel: (66) 2451 6670 Email: info@oas.co.th Website: www.oas.co.th
ORIENTAL MOTOR (THAILAND) CO., LTD. 900, 8th Floor Zone C, Tonson Tower Ploenchit Road Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Tel: (66) 2251 1871 Email: sales@orientalmotor.co.th Website: www.orientalmotor.co.th
PANASONIC ECO SOLUTIONS SALES (THAILAND) CO., LTD. 18th Fl. Silom Complex Bldg., 191 Silom Road Bangrak Bangkok 10500 Thailand Tel: (66) 2231 3683 to 7
PROSHOP CENTER CO., LTD. 88/153 Moo 10 Bangkaew Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2181 2317 Email: Mr.Karcher@karcherthai.com Website: www.proshopthai.com
Q-CONTROL ENGINEERING CO., LTD. 22/7-9, 22/37-41 Moo4Bangna-Trad Road Bangbor Samutprakarn 10560 Thailand Tel: (66) 2705 5888 Email: qcontrol.q-control.co.th Website: www.q-control.co.th
QUALITECH CONTROL CO., LTD. 116/97-101 Nonsi Road Chongnonsee Yannawa
Tel: (66) 2681 1180 (Auto), (66) 8 9699 3637 Email: sales@qualitech.co.th
PHOENIX CONTACT (THAILAND) CO., LTD. 797, 1st and 2nd Floor Rama9Road Bangkapi Huaykwang Bangkok 10310 Thailand
Tel: (66) 2719 7957
Soi Lardprao 94
PISANU ENGINEERING CO., LTD. 800/43-45 Soi Trakul suk Asoke Dindaeng Road Dindaeng Bangkok 10400 Thailand Tel: (66) 2245 9113 Email: ecsales@pisanu.co.th Website: www.pisanu.co.th
Tel: (66) 2934 4790, (66) 8 5905 9757 Email: info@royaltec.com Website: www.royaltec.com
S.T. CONTROL CO., LTD. 84/1 Soi Ramkhamhaeng9Ramkhamhaeng Road Pubpla
POWERADE CO., LTD. 476/2-4 Soi Pattanakarn 53 Pattanakarn Road Suanluang Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2322 0810 to6Email: prasop@powerade.co.th Website: www.powerade.co.th
Wangthonglang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2105 5999 Email: info@stcontrol.com Website: www.stcontrol.com
SAHAMIT MACHINERY PUBLIC CO., LTD. 42, 48 Rama3Road, Soi 53
55/26 Moo4Bueng Kham Phro
Lumlukka Bangkok 12150 Thailand
50/1 Soi Tiwanon 40 Tiwanon Road
Tel: (66) 2150 7808 to 10, (66) 8 1628 7321, (66) 8 1890 5050
Tel: (66) 2295 1000
Tel: (66) 2952 4400 (Thailand), +959261036495 (Myanmar)
NAMSANG ENGINEERING CO., LTD. (NSE) 759 Rama3Road
2 Soi Premier2Srinakarin ROAd
Tel: (66) 2294 8946, (66) 2708 5991
Tel: (66) 2301 2100 to 1
Tel: (66) 2736 4460
SATTEL (THAILAND) CO., LTD.
52/84 Moo4Soi Phaholyothin 52
1448/18 Ladprao 87 (Soi Chantrasuk)
Tel: (66) 2743 8888, (66) 8 4026 8292
Tel: (66) 2937 8729 to 30
Tel: (66) 2515 0600 (Auto 12 lines)
TKK CORPORATION CO., LTD. SERVO DYNAMICS (THAILAND) CO., LTD.
71 Soi Yenjit6Thungwaddon
52/210 Moo2Soi Wadnamdaeng Srinakarin Road
555 Rasa Tower 2, 14th Floor, Unit 1401-1402
Tel: (66) 2211 7892
Tel: (66) 2753 5625
Email: info@servoline.com Website: www.servoline.com
ULTRA ENGINEERING CO., LTD. 2/7 Soi Mooban Settakit6Bangkae nua
ENOVA AUTOMATION CO., LTD.
98/3 Moo 2
134/469 Nonthaburi Road
Tel: (66) 2444 0844
Tel: (66) 2156 9294 to 97
Tel: (66) 2967 1379
Email: warapoj@silic.co.th Website: www.silic.co.th
VEERASIAM HARDWARE CO., LTD. 1015/6-8 Sukhumvit 71 Road Klongtan Nue Wattana
294/71-77 Romklao Road
99/218A Phanasoncity Village
Tel: (66) 2392 9913 to 4
Tel: (66) 2184 9798 to9Email: info@smart-motion.co.th Website: www.smart-motion.co.th
Tel: (66) 2703 0703
VP AUTOMATION SYSTEM CO., LTD. 48/12 Moo 13 Phuttamonthon5Road Raikhing
Email: info@e-s-e.co.th Website: www.e-s-e.co.th HITACHI SUNWAY INFORMATION SYSTEMS THAILAND LTD.
Nakorn Phatom 73210 Thailand
252/21 Unit E. 17th Floor
Tel: (66) 2445 3881
Muang Thai-Phatra Office Tower I
Tel: (66) 2750 8288
Tel: (66) 2693 2090 to4Email: contact@hitachi-sunway-is.com
SYSTRONICS CO., LTD. 612 Jarunsanitwong Road
Bangor Bangplad Bangkok 10700 Thailand Tel: (66) 2879 1127 to9Email: info@systronics.co.th
I.E.MAC CO., LTD. 731/27 Trok Watchan nai Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2293 1845, (66) 8 1634 9115
T&D POWER TECH(THAILAND) CO., LTD.
CAD INNOVATIVE CO., LTD.
40 Visessiri Bulding 2, 5fl. Thetsaban Rangsan Nua Road
507/321 Freight Link Tower 6th Floor
22/26 Sukaphiban2Road
Soi Sathupradith 31 Sathupradith Road
Chong Non Sri Yannawa
Tel: (66) 2591 6799
Tel: (66) 2002 4395 to 7
Tel: (66) 2674 1383
92/1 Moo7Petchkasem Road
19/62 Moo 10 Klong Nueng
Tel: (66) 2293 0211
Tel: (66) 2832 5999
MARKEM-IMAJE LTD. 2nd Floor, RN Building, 961 Rama3ROAd
Bangpongpang Yannawa Bangkok 10120 Thailand Tel: (66) 2689 7333 Website: th.markem-imaje.com
MATERIAL AUTOMATION (THAILAND) CO., LTD. 29th FL., CTI Tower 191/11-12 Ratchadapisek Road
Chemical, Material Handling, Metrology, Warehousing, Waste Management
Tel: (66) 2887 1091
Tel: (66) 2261 5100
FALCON EAST CO., LTD. 235/18 Rajpattana Road
99/9 Central Plaza Chaengwattana Office Tower 19 Floor Room no.1907-9 Moo2Chaengwattana Road Bangtarad Pak-kred Nonthaburi 11120 Thailand Tel: (66) 2835 3539 Email: sales@riverplus.com
17th A.P.Nakarintr Bldg., 88 Soi Lasalle 58 Bangna Bangna Bangkok 10260 Thailand Tel: (66) 2748 6211
MHE-DEMAG (T) LTD. 23/110-117 Sorachai Building, 25-29th Floor Soi Sukhumvit 63 (Ekamai) Watthana Khlong Tan Nuea Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2787 8500 Email: info_mhe@mhe-demag.com Website: www.mhe-demag.com
Tel: (66) 2927 5825
82/8 Moo3Watnamdang Road
GETECE CO., LTD. 208 Wireless Road Bldg. 15th fl. unit 1501 Wireless Road Bangkok 10330 Thailand
SOLUTION CENTER CO., LTD.
3M THAILAND LTD. 159 Sermmit Tower 12fl. Asoke-Montri Road
42/9 Thawi Watthana-Kanchanaphisek
FACTORY MANAGEMENT, OTHER PRODUCTS & SERVICES
METRO LUBRICANTS.CO., LTD.
Tel: (66) 2651 5551 to4Email: info@getece.com Website: www.getece.com
Bangpleeyai Bangplee Samutprakarn 10540 Thailand Tel: (66) 2751 0389 Website: www.mrich.co.th
NILFISK-ADVANCE CO., LTD. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Jomphol Chatuchak Bangkok 10900 Thailand
3 Soi. Bangna-Trad 34
Bangna-Trad Road Bangna
SP VISION TECHNOLOGY CO., LTD. 5/1 Moo 8 Samrong-Nue Muang Samutprakarn 10270 Thailand Tel: (66) 2186 4572
Tel: (66) 2361 3695 Email: contact.th@hexagonmetrology.com Website: www.hexagonmetrology.com
700/685 Amatanakorn Industrial Estate Moo 1
Phanthong Phanthong Chonburi 20160 Thailand
SSI SCHAEFER SYSTEMS INTERNATIONAL CO., LTD. 3904-5, 9th Floor BB Building, 54 Sukhumvit 21 (Asoke) Klong Toey Nua Wattana Bangkok 10110 Thailand Tel: (66) 2204 0205 Website: www.ssi-schaefer.co.th
Tel: (66) 3831 6400 Email: th.sales@interroll.com Website: www.interroll.com
278 B1, Fl.1-2 Raintree Office Garden Soi Soonvijai4Rama IX Road Bangkapi Huaykwang Bangkok 10310 Thailand Tel: (66) 2319 9933
REP-FLOOR CO., LTD. 112/28 Moo6Soi Suksawat 76 Suksawat Road Bangchak Phrapradaeng
Email: info@repfloor.co.th Website: www.repfloor.co.th
Tel: (66) 2948 4160
No.1518 Pracharat Sai 1 Road
Tel: (66) 2585 9070
Tel: (66) 2817 8159
SYNTHETECH CO., LTD. 135 Soi Ramkhamhaeng 30/1 (Ramvilla) Ramkhamhaeng Road Huamark
Thai-French Innovation Institute Bld. (8th floor),
1083/37 Krungthep-Nonthaburi Road
Khlong Chan Bangkapi
Tel: (66) 2910 9728 to 29
34 Soi Pho Kaeo 1 Yaek 3
P.T.K. EQUIPMENT CO., LTD.
KEEEN LIMITED 86, 88, 90 Chalermprakiat Rama9Road Nongbon Prawet Bangkok 10250 Thailand Tel: (66) 2747 2102 to3Email: Info@keeen.co.th Website: www.keeen.co.th
MECHATRIC CO., LTD. 1564/19 Pracharaj 1 Road
Bangkapi Bangkok 10240 Thailand Tel: (66) 2732 1300 to 3, (66) 8 9191 8830 Email: sales@synthetech.co.th Website: www.synthetech.co.th
V-SERVE LOGISTICS LIMITED 709/57 Onnuch Road Suanluang Bangkok 10250 Thailand
Tel: (66) 2332 3940 to 5
Tel: (66) 2587 8462 to 3
The 3rd International Processing & Packaging Exhibition for Myanmar ProPak Myanmar 2016, the 3rd international exhibition and technology
“Myanmar’s agribusiness industries will playakey role in the growth
for processing and packaging in food, beverage and pharmaceutical which
and success of our economy. We must properly nurture and develop these
held on September 22 - 24, 2016 at Myanmar Event Park (MEP), Yangon has
industries to help our country regain and even surpass our previous agricultural
been succeed with plentiful visitors.
capabilities asalead producer in the region. Ensuring the modernization and
Besides the event showcasing of products, technologies and new
development of agri-business of Myanmar and its people” Said U Zaw Min
interesting machineries, the educations and forum in the exhibition also
Win, President, Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and
available for the visitors. This isahuge promising for agri-business industries.
The introducing of technologies, knowledges and new possibilities which open
“Agri-business will beakey industry for growth as the country continues
the new door of competitive chances in packaging industries of food and
to open-up and reform. And this is where ProPak Myanmar plays such an
beverage in Myanmar, also raised the standard of export quality processed
important role by bringing new technology, innovation and education in
and packaged foods and beverages too.
Myanmar for the industry” Said Mr. Fraser Hawkes, General Manager, Myanmar
ProPak Myanmar 2016 presented 211 exhibitors from 21 countries, 5
international pavilions from China, Italy, Singapore, Taiwan and Thailand. The
ProPak is clearlyadynamic exhibition that could push the food industrial
exhibition concluded the National Conference on Food Industry Development
of Myanmar forward. The visitors and exhibitors could share and brought the
experience to improve their business competitiveness. This fruitful exhibition
The title for the National Conference on Food Industry Development 2016
can bring the best chance at the present time of Myanmar to the people who
was ‘Education of Food Science and Technology to Upgrade Small and Medium
readied their investment or even inspire people with the strongest point of
Food Enterprise in Myanmar’. The conference was organized by the Food
Myanmar, the food industry.
Science & Technology Association of Myanmar (FoSTAM) which discussed about the latest developments, trends and techniques in research and innovation to advance the food science and technology industry.
“Myanmar’s Most Complete Medical, Dental, Plastic Surgery And Aesthetic Products Event!”
Dental Myanmar 2016 An International Exhibition of Dental Technology, Equipment & Supporting Industries
An International Exhibition of Plastic Surgery Technology, Equipment & Supporting Industries
An International Exhibition of Aesthetic Products & Its Supporting Industries
19-21 October 2016 Sule Shangri-La Hotel, Yangon, Myanmar
တိမ်းစောင်းလည်ပတ်စားပွဲဖြင့် အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းအပိုင်းအစဆိုင်ရာ စုံလင်မျက်နှာပြင်စက် စုံလင်မျက်နှာပြင်စက် ၅ ဝင်ရိုးတစ်ပြိုင်တည်းကြိတ်စက် စင်တာ
ချောမွေ့သောနည်းပညာ၏အချက်အချာ ချောမွေ့သော မားဇက်ထရိုးလ်သစ် CNC စီးရီးစ် သင်၏ထုတ်ကုန်စွမ်းအားတိုးမြှင့်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည် ကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံး - မကြုံစဖူးအမြန်နှုန်းနှင့်တိကျမှုအတွက် နောက်ဆုံးဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲ အဆင့်မြင့် အသိဉာဏ်ဖန်ရှင်များနှင့်အတူ မည်သူမှမယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်ဆောင်ရွက်မှုများအတွက် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသည်။ ချောမွေ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထောက်ခံအားပေးသောဆော့ဖ်ဝဲသည် ပိုမိုမြင့်မားသောကုန်ထုတ်စွမ်းအားများ အတွက်သင်၏စက်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုပေါင်းစပ်နိုင်သည်။
Service Call Center : +(66)2402-0652 E-mail : info@mazakthai.com URL : www.mazakthai.com
Modern Manufacturing Magazine : October-December 2016 Myanmar Edition